ကျွန်ုပ်တို့အနေနဲ့နောက်ဆုံးပေါ်အကြံပြုချက်တွေဖြစ်တဲ့ သင့်တော်တဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုတွေ၊ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးဆေးဝါးတွေ၊ အင်းဆက်တွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရောဂါတွေနဲ့ ခရီးသွားတွေရဲ့ဝမ်းလျှောခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်နိုင်ဖို့ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးစီမံချက်တွေကိုအကြံပြုလမ်းညွှန်ပေးနိုင်ပါတယ်။
မဆိုက်ရောက်မီ ဆိုက်ရောက်သည့်အချိန် ထွက်ခွာသည့်အချိန် ငွေပေးချေရန်နည်းလမ်းများ
BUMRUNGRAD INTERNATIONAL HOSPITAL ရှိ Alternative Hospital Quarantine (AHQ)
ယခုဖြစ်ပွားလျက်ရှိသောကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါအ​ခြေအနေများအရ ထိုင်းနိုင်ငံ၏သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများမှ ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းသို့ဝင်ရောက်ခွင့် (ထိုင်းနိုင်ငံသို့ဆိုက်ရောက်သည်နှင့်ကွာရန်တင်းနေထိုင်ရန်အပါအဝင်) နှင့်ပတ်သက်သောစည်းမျဥ်းများကိုသတ်မှတ်ပြဠာန်းထားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့အနေနဲ့ ဒီလိုခက်ခဲတဲ့ အချိန်မျိုးမှာ လူနာတွေလက်ခံပေးနေပြီး quarantine လူနာတွေ နဲ့ သူတို့ရဲ့ အဖော်တွေကို အဆင့်အမြင့်ဆုံးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေကို ပေးအပ်နိုင်ဖို့ အဆင်သင့်ရှိနေပါတယ်။
အတည်ပြုခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွက် လိုအပ်တဲ့ စာရွက်စာတမ်းများ
၁။. တရားဝင်လက်မှတ်ပါတဲ့ လူနာရဲ့ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မိတ္တူ
၂။. တရားဝင်လက်မှတ်ပါတဲ့ လူနာစောင့်ရဲ့ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မိတ္တူ [အများဆုံး လူနာစောင့် ၃ ယောက်၊ ၁ ယောက်တည်း ပိုပြီးသင့်လျော်သည်။]
၃။. သင့်တော်တဲ့ စစ်ဆေးမှုရလဒ်တွေနဲ့ နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်း
၄။. လက်ရှိနေထိုင်တဲ့ တိုင်းပြည်ရှိ ဆရာဝန်တစ်ယောက်ရဲ့ ထိုင်းတွင် ကုသမှုခံယူဖို့လိုအပ်ကြောင်း လွှဲပြောင်းစာ
၅။. အမည်၊ ထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့ ထောက်ပံ့သူ သို့ စင်တာရဲ့အမည်၊ ကာကွယ်ဆေး lot နံပါတ်တွေပါဝင်တဲ့ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံထားခြင်းလက်မှတ်
၆။. ငွေကြေးအခြေအနေပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်အထား၊ ဥပမာ - ဘဏ်ရှင်းတမ်း
၇။. အားကိုးအားထားသူဖြစ်ကြောင်း ထောက်ခံစာ (အဖော်ပါသော လူနာများအတွက်သာ)*
၈။. Quarantine ဝင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ သဘောတူညီချက်စာစောင်*
၁၀။. ခရီးသွားလမ်းညွှန်၊ ဆေးဖက်ဆိုင်ရာနှင့်ခွဲစိတ်စောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာအကဲဖြတ်မှတ်တမ်း
*နံပါတ် ၇ - ၁၀ : Bumrungrad International မှ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပေးပြီး လူနာနဲ့ လူနာစောင့်များမှ ဖြည့်ပြီး လက်မှတ်ထိုးပေးရန်။
ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ဝင်ရောက်နိုင်ဖို့ ခွင့်ပြုချက်ရရန် သင့်တော်တဲ့ စာရွက်စာတန်းများကို ထိုင်းအာဏာပိုင်များထံ တင်ပြရပါမယ်။ ခွင့်ပြုချက်ရတာနဲ့ (COE) ပြည်ဝင်ခွင့်လျှောက်နိုင်စေဖို့ တံဆိပ်တုံးထုထားတဲ့ ခွင့်ပြုစာကို လူနာရဲ့ လက်ရှိနေထိုင်ရာတိုင်းပြည်သို့ အင်တာနက် https://coethailand.mfa.go.th/ ကနေပို့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအဆင့်ကနေစပြီး ထိုင်းဆေးဗီဇာ application လည်း လိုအပ်လာပါပြီ။
BUMRUNGRAD INTERNATIONAL HOSPITAL ရဲ့ QUARANTINE အတွက် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
ထိုင်းနိုင်ငံကို ရောက်တဲ့အပေါ်မူတည်ပြီး Quarantine က ၇ ရက်၊ ၁၀ ရက် သို့ ၁၄ရက် (အပို ၁-၂ရက်)
မဆိုက်ရောက်မီ အနည်းဆုံး ၁၄ ရက်အလိုကတည်းက အသိအမှတ်ပြု COVID-19 ကာကွယ်ဆေးကို ဆေးပတ်ပြည့်စွာ ထိုးထားသူများ : Quarantine ၇ ရက်
အသိအမှတ်ပြု COVID-19 ကာကွယ်ဆေးကို ဆေးပတ်ပြည့်စွာ မထိုးထားသူများ : Quarantine ၁၀ ရက်
နယ်စပ်များမှ မြေပြင်သယ်ယူပို့ဆောင်မှုနဲ့ ခရီးသွားများ : Quarantine ၁၄ ရက်
"ရောက်ရှိချိန် (လက်မှတ်မှာပြထားတဲ့အတိုင်း) ညဉ့်သန်းခေါင် 12:01am ကနေ 6:00pm = ပထမနေ့။
ရောက်ရှိချိန် 6:01pm ကနေ ညဉ့်သန်းခေါင်12:00am အထိ = ၀ နေ့၊ နောက်တစ်ရက်မနက် = ပထမနေ့။"
လူနာစောင့်တစ်ဦးသာ လူနာနဲ့ တစ်ခန်းတည်းနေရပါမည်။ ဒုတိယလူနာစောင့်နှင့်တတိယလူနာစောင့်များကတော့ တစ်ယောက်တစ်ခန်းစီခွဲနေရပါမည်။
လူနာနဲ့ လူနာစောင့်တွေက ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစစ်ဆေးမှုတွေနဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေအတွက်ကလွဲပြီး အခန်းထဲမှာပဲ တစ်ချိန်လုံးနေရပါမည်။
ဖျားနာမှုနဲ့ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်ရောဂါလက္ခဏာများကို စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းခံယူရမည်။
COVID-19 တို့ပတ်ဖြင့်နမူနာယူခြင်း (rt-PCR) ×2ကြိမ် (ရက် ၀-၁ နဲ့ ၆/ ရက်၀-၁ နဲ့ ၈/ ရက် ၀-၁ နဲ့ ၁၂ အရ)
COVID-19 positive ဖြစ်ပါက Bumrungrad International ဆေးရုံတွင် မိမိစရိတ်နှင့်ဆေးရုံတက်ကုသနိုင်ပါသည်။ (အာမခံဝယ်ယူထားပါက Company ၏စည်းမျဉ်းများအတိုင်းအကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်သည်။)
အချိန်မတိုင်မီ နေရပ်ပြန်ခြင်း/ပြန်ပို့ခြင်းကို ထိုင်းအာဏာပိုင်များက ခွင့်မပြုပါ။
နိုင်ငံခြားသားများ လူနာအဖြစ်ဝင်ရောက်လာပါက ဆေးရုံတွင်သာ Quarantine ဝင်ရပါမည်။
သတင်းအချက်အလက်များနှင့် AHQ Packages များအကြောင်း ပိုမိုသိရှိရန်၊ Download လုပ်ပါ။
ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ မတူကွဲပြားသောရှုခင်းများ၊ ကမ္ဘာကျော် အစားအစာများနှင့် ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုတို့ဖြင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ ထောင်နှင့်ချီသော ခရီးသွားများနှင့် နေထိုင်သူအသစ်များကို ဆက်လက်ဆွဲဆောင်လျက်ရှိပါတယ်။။ ခရီးသွားများနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေထိုင်သူများအနေနဲ့ နိုင်ငံအတွင်း နေထိုင်သမျှကာလတစ်လျှောက်လုံး တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုနဲ့ လုံခြုံမှုကို ခံစားနိုင်ပေမယ့် ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ကြုံတွေ့နေတဲ့ လက်ရှိအခြေအနေများကိုလည်း သတိထားဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံ၏ အစိုးရဖွဲ့စည်းပုံအား ၂၀၁၆ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် ဘုရင် ဘူမိဘော အဒူယာဒက် ကွယ်လွန်ပြီးနောက် ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် နန်းတက်ခဲ့သော လက်ရှိ ဘုရင် မဟာဝိဇယလောင်ကွန်း၏ လက်အောက်ရှိ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့်ညီသော ဘုရင်စနစ်ဟု လူသိများသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ ၂၀၀၅ ခုနှစ်ကတည်းက နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုအများအပြားကို ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီး ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းခဲ့ကာ ထိုအချိန်က ၀န်ကြီးချုပ် သက်ဆင် ချိုင်းနားဝပ်ကို ဖယ်ရှားပြီးနောက် အစိုးရ ဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြမှုများနှင့် ပြိုင်ဖက် နိုင်ငံရေး အင်အားစုများကြား နှစ်ပေါင်းများစွာ ပဋိပက္ခများ ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် တပ်မတော် အစိုးရ သက်တမ်း ကုန်ဆုံးသွားသော်လည်း တပ်မတော်က အုပ်ချုပ်ရေးအသစ်ကို ဆက်လက် လွှမ်းမိုးထားပါတယ်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ် မတ်လ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် စစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းတဲ့ Phalang Pracharat (PP) ပါတီ ဦးဆောင်သော ယာယီညွန့်ပေါင်းအစိုးရကို ဝန်ကြီးချုပ် ပရာယွတ်ချန်အိုချာရဲ့ လက်အောက်မှာ ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်။
ယနေ့မှာဆိုရင် ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဧပြီလတွင် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသစ်ကို လက်မှတ် ရေးထိုးခြင်းနဲ့အတူ ထိုင်းနိုင်ငံနေရာအများစုမှာ နိုင်ငံရေးအခြေအနေ တည်ငြိမ်နေပါပြီ။သို့ပေမယ့် နိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွင် လူမျိုးရေးနှင့် အမျိုးသားရေး သောင်းကျန်းသူများကြောင့် ဆူပူအကြမ်းဖက်မှုများ ဆက်လက်ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ ခရီးသွားများနှင့် နေထိုင်သူများအနေဖြင့် အဆိုပါဒေသများသို့ ခရီးသွားရာတွင် သတိထားရန်နှင့် လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသော နိုင်ငံရေးအခြေအနေကို အမြဲနားစွင့်နေဖို့ တာဝန်ရှိသူများက ဆက်လက် အကြံပြုထားပါတယ်။ ဘန်ကောက်တွင် နိုင်ငံရေး လမ်းပေါ်ထွက် ဆန္ဒပြပွဲများ တစ်ခါတရံ ဖြစ်ပွားလေ့ရှိတာကြောင့် ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုများ ရှိနိုင်ပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံသည်သတင်းအချက်အလက်နှင့် သတင်းပညာတွင်ကောင်းမွန်ပြီး တရားမျှတစွာတစ်သမတ်တည်းရှိတဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးပါသည်။ လက်ရှိနိုင်ငံရေးဖြစ်ရပ်များနှင့် အဖြစ်မှန်များကို အင်္ဂလိပ်နှင့် ထိုင်းဘာသာ (၂) မျိုးစလုံးဖြင့်သတင်းရေးသားတင်ပြလျက်ရှိသည်။ ဤကဲ့သို့သောနေရာတစ်ခုမှာ Bangkok Post ကဲ့သို့သောသတင်းဌာနပင်ဖြစ်သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံရှိ လုံခြုံမှု : လမ်းခရီးသွားခြင်း
ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းခရီးသွားရာတွင် ဘတ်စ်ကားများ၊ ရထားများ၊ လေယာဉ်များ၊ လှေများဖြင့် နိုင်ငံ၏ဒေသအားလုံးနီးပါးသို့ လွယ်ကူစွာရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဘန်ကောက်မြို့အတွင်း၌ တက္ကစီများ၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ်များ၊ ကားများနှင့် ကျယ်ပြန့်သော မြေအောက်ရထားစနစ်က တစ်မြို့လုံးကို ချိတ်ဆက်ထားပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ယာဉ်မောင်းနှင်လိုသူများအတွက် ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ယာဉ်မောင်းနှင်ခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ၊ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် အရေးကြီးတဲ့ အချက်အချို့ရှိပါတယ်။ “ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းယာဉ်မောင်းနှင်ခြင်း” ဝဘ်ဆိုက်မှာ ထိုင်းနိုင်ငံတွင်ယာဉ်မောင်းနှင်မှုနှင့်အတူ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများနှင့် ထင်မြင်ချက်များအတွက် ပြည့်စုံသောအချက်အလက်များရရှိနိုင်ပါတယ်။
၂၀၁၉-nCov အခြေအနေအတွက် နောက်ဆုံးအခြေအနေများ
၂၀၁၉-nCov နောက်ဆုံးအခြေအနေများအတွက် Bumrungrad International Hospital ရှိ ကူးစက်မှုကာကွယ်ရေး၊ ထိန်းချုပ်ရေးအစီအမံများနှင့် ကူးစက်မှုရှောင်ရှားနိုင်ဖို့အကြံပြုချက်။
Coronavirus : သင်သိဖို့လိုအပ်တာတွေ
ကူးစက်မှုကို ကာကွယ်နိုင်ဖို့ ရိုးရှင်းတဲ့အချက် ၅ ချက်
သင့်လိုအပ်ချက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ face mask ကို သေချာပေါက် ရွေးချယ်ပါ။
Bumrungrad International ဆေးရုံရဲ့ ဝင်ပေါက်နေရာများတွင် အပူပုံရိပ်ဖော်ကင်မရာများ အသုံးပြုခြင်းကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။
Bumrungrad မှ လူနာများ၊ ဧည့်သည်များနှင့် ဝန်ထမ်းများကို ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကူးစက်မှုမှ ကာကွယ်ရန် အပိုသတိထားမှုများ လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။
ဘေးကင်းမှုအဆင့်အမြင့်ဆုံးရှိစေဖို့ ဒီဆေးခန်းတွေက တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု သီးခြားစွာ တည်ရှိနေပါတယ်။
Bumrungrad အနေနဲ့ COVID-19 ကို တိုက်ဖျက်ရန် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် ပိုးသတ်စက်ရုပ်ဖြင့် အဆင့်မြှင့်ထားပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံရှိ COVID-19 အခြေအနေ
"ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့က ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ (COVID-19) ရောဂါဖြစ်ပွားမှုက ကမ္ဘာအနှံ့ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေကြောင်းတင်ပြခဲ့ပါတယ်။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် ဖြစ်ပွားမှုနှင့် သေဆုံးမှုအရေအတွက်က လွန်ခဲ့သည့်ရက်သတ္တပတ် (၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇွန် ၁၄ရက် မှ ၂၀ရက်) တွင် အပတ်စဉ် အသစ်ဖြစ်ပွားသူ ၂.၅ သန်းကျော်နှင့် သေဆုံးသူ ၆၄၀၀၀ ကျော်သာရှိသဖြင့် ယခင်သီတင်းပတ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ၆% နှင့် ၁၂% အသီးသီး လျော့ကျသွားခဲ့ကြောင်းသိရှိပါတယ်။
တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင် ရောဂါဖြစ်ပွားမှု အရေအတွက်သည် ယခု ၁၇၇ သန်းကျော်လွန်သွားသော်လည်း ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလနောက်ပိုင်း အပတ်စဉ် ဖြစ်ပွားမှု အနိမ့်ဆုံးဖြစ်ကြောင်း ပြီးခဲ့သည့် သီတင်းပတ်က ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် လွန်ခဲ့သည့် ရက်သတ္တပတ်အတွင်း နေ့စဉ်သေဆုံးမှု ၉၀၀၀ ကျော်ဖြင့် မြင့်မားနေဆဲဖြစ်သော်လည်း လွန်ခဲ့သည့် ရက်သတ္တပတ်အတွင်း အစီရင်ခံတင်ပြထားသော သေဆုံးမှုအသစ်အရေအတွက်က အရှေ့မြေထဲပင်လယ်နှင့် အာဖရိကဒေသများမှလွဲ၍ ဒေသအားလုံးတွင် လျော့ကျသွားခဲ့ပါတယ်။
ဤထုတ်ဝေမှုတွင် SARS-CoV-2 အကျိုးစီးပွားမျိုးကွဲများ (VOIs) နှင့် စိုးရိမ်စရာမျိုးကွဲများ (VOCs) Alpha (B.1.1.7), Beta (B.1.351), Gamma (P.1) နှင့် Delta (B.1.617.2) တို့အတွက် အထူးအာရုံစိုက်မွမ်းမံပေးထားပါတယ်။
၎င်းတွင် VOCs များ၏ phenotypic ထူခြားတဲ့ပင်ကိုယ်လက္ခဏာများ (ကူးစက်နိုင်မှု၊ ရောဂါပြင်းထန်မှု၊ ပြန်လည်ကူးစက်နိုင်ခြေနှင့် ရောဂါရှာဖွေရေးနှင့် ကာကွယ်ဆေးစွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် သက်ရောက်မှုများ) ဝန်းကျင်မှာ အထောက်အထားများပေါ်ပေါက်လာခြင်းရဲ့ နောက်ဆုံးအခြေအနေများ နှင့် VOCs ရဲ့ ပထဝီဝင်ဆိုင်ရာ ဖြန့်ဖြူးမှုဆိုင်ရာ နောက်ဆုံးအခြေအနေများ ပါဝင်ပါတယ်။
ဤထုတ်ဝေမှုတွင် SARS-CoV-2 ရဲ့ စိုးရိမ်စရာမျိုးကွဲများအပေါ် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုနှင့် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ စွက်ဖက်မှုများအပေါ် ၎င်းတို့ရဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုများအကျဉ်းချုပ်လည်း ပါဝင်ပါတယ်။"
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ၂၀၁၉ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါအခြေအနေ
ယနေ့ (ဇွန် ၂၂၊ ၂၀၂၁) တွင် ပြည်နယ် ၄၁ ခုမှ အတည်ပြုလူနာ အရေအတွက် ပိုများလာကြောင်း တင်ပြခဲ့ပါတယ်။ အတည်ပြုလူနာ အများဆုံးပြည်နယ်ငါးခုမှာ Samut Prakan၊ Chonburi၊ Nakhon Pathom၊ Samut Sakhon နှင့် Songkhla တို့ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း ဒေသတွင် အတည်ပြုလူနာ အရေအတွက် တိုးလာခြင်းက ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းခွင် သို့မဟုတ် စက်ရုံများနှင့် သက်ဆိုင်ပါတယ်။ တောင်ပိုင်းဒေသမှာတော့ ဘာသာရေးကျောင်းများနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအဖွဲ့အစည်းများတွင် တွေ့ရှိရပါတယ်။ ထို့အပြင် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုအခြေအနေအရ အသက် ၁၈ နှစ်အထက်လူဦးရေတွင် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုအများဆုံးပြည်နယ်ငါးခုမှာ ဖူးခက်၊ စမွတ်စခွန်၊ ရနောင်း၊ ဘန်ကောက်နှင့် နွန်သဘူရီ စတဲ့ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးသည့် အစီအစဉ်များ အရှိန်မြှင့်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ ပြည်နယ်များဖြစ်ကြပါတယ်။ သို့သော်လည်း အမျိုးသား ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုက လူအုပ်ရဲ့ ကိုယ်ခံစွမ်းအားကို မြှင့်တင်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ အဆင့်အောက်မှာ ရှိနေပါတယ်။ လက်ရှိ ကာကွယ်ဆေးလွှမ်းခြုံမှုမှာ အသက် ၁၈ နှစ်အထက် လူဦးရေ စုစုပေါင်း၏ ၅.၅% မှ ၃၀.၄% အထိ ရှိပါတယ်။ ထို့အပြင် လက်ရှိ ကာကွယ်ဆေးလွှမ်းခြုံမှုက COVID-19 ကူးစက်မှုကို မကာကွယ်နိုင်ပါ။ အရေးကြီးတဲ့ ကာကွယ်ရေး စီမံချက်တွေဖြစ်တဲ့ DMHTT၊ local bubbleနှင့် ပိုးမွှားများကို ကာကွယ်ရန် တံဆိပ်ခတ်ထားတဲ့လမ်းညွှန်ချက်များကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ ထို့အပြင် အလုပ်သမားများအကြား ဖြစ်နေတဲ့သူတွေကို ရှာပြီး ၎င်းတို့အား သီးခြားခွဲထုတ်ကာ လျင်လျင်မြန်မြန် ကုသနိုင်ပါတယ်။ သေဆုံးမှုနှုန်းကို လျှော့ချရန် ဦးစားပေးအုပ်စုများတွင် ကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့ စီစဉ်သင့်ပါတယ်။
COVID-19 ကနေ မိမိကိုယ်ကိုယ်ကော တခြားသူကိုပါ ကင်းဝေးအောင်ဘယ်လိုမျိုးနေမလဲ။
သင့်ကိုယ်သင်နဲ့ တခြားသူတွေကြားမှာ အနည်းဆုံး ၁ မီတာအကွာအဝေးခြားပြီး နေပါ။
အနားမှာ အခြားလူတွေရှိတယ်ဆိုရင် ပုံမှန်လည်း mask တပ်ဆင်ပါ။
သင့်လက်တွေကို ဆပ်ပြာ သို့ အယ်လ်ကိုဟောဂျယ်နဲ့ အမြဲတမ်း ဆေးကြောပါ။
မျက်လုံး၊ နှာခေါင်း နဲ့ ပါးစပ်တွေကို မထိပါနဲ့။
တခြားသူတွေနဲ့ အိပ်ခန်း၊ ရေချိုးခန်း၊ အိမ်သာနဲ့ တစ်ကိုယ်ရည်သုံးပစ္စည်းတွေကို ခွဲခြားပြီး ထားပါ။
သင့်ကိုယ်သင် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးလို့ ချောင်းဆိုးခြင်း၊ လည်ချောင်းနာခြင်း၊ နှာရည်ယိုခြင်း သို့မဟုတ် အသက်ရှူရခက်ခြင်းစတဲ့ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းရောဂါလက္ခဏာတွေက အဖျားနဲ့အတူ ဖြစ်နေပြီဆိုရင် ချက်ချင်း ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအရ အထူးဂရုပြုဆောင်ရွက်မှုခံယူပါ။ ပထမဆုံး ဖုန်းခေါ်ပြီး သင့်ဒေသဆိုင်ရာကျန်းမာရေးတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ လမ်းညွှန်ချက်တွေကို လိုက်နာပါ။
ထိုင်းနိုင်ငံကို ခရီးသွားလာမယ့်သူတွေအတွက် အဓိကသတင်းအချက်အလက်
ထိုင်းနိုင်ငံကို ခရီးမသွားခင် သေချာပေါက် ကာကွယ်ဆေးထိုးပါ။
ကာကွယ်ဆေးမထိုးထားတဲ့ ခရီးသွားတွေအနေနဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံကို မလိုအပ်ဘဲ ခရီးသွားခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေအရ COVID-19 မျိုးကွဲတွေကို ကူးစက်နိုင်ချေနှင့် ဆက်လက်သယ်ဆောင်ပြန့်ပွားနိုင်ချေ အန္တရာယ်များရှိပါတယ်။
ခရီးသွားတွေအနေနဲ့ mask တပ်ခြင်းနဲ့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ၆ ပေ အကွာမှာ နေခြင်း အပါအဝင် ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ အကြံပြုချက်တွေနဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို လိုက်နာသင့်ပါတယ်။
COVID-19 ထိတွေ့မှုရှိပြီး ဖျားနာနေတယ်ဆိုရင်၊ စစ်ဆေးလိုက်လို့ COVID-19 positive ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် သို့မဟုတ် COVID-19 စစ်ဆေးချက်ကို စောင့်နေတယ်ဆိုရင် လုံးဝခရီးမသွားပါနဲ့။ ဘယ်အချိန်မှာ ခရီးသွားလို့ လုံခြုံမလဲလေ့လာပါ။ ဖျားနေတဲ့ သူတစ်ဦးဦးနဲ့ ခရီးမသွားပါနဲ့။
Bumrungrad International Hospital မှာ သင့်အနေနဲ့ ရက်ချိန်းမယူခင် ထိုင်းနိုင်ငံကို ဝင်ရောက်ခွင့် လိုအပ်ချက်တွေကို စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံကို ဝင်ရောက်ခွင့်ရဖို့ဆိုရင် သင့်အနေနဲ့ ကာကွယ်ဆေးထိုးထားဖို့ သို့ ဗီဇာလျှောက်ဖို့ လိုအပ်နိုင်ပါတယ်။
ကျန်းမာရေး နှင့် ကာကွယ်ဆေးများ
အခြားနိုင်ငံအများစုသို့ ခရီးသွားခြင်းကဲ့သို့ပင်၊ ခရီးသွားများအားလုံးကို ခရီးမထွက်မီ နောက်ဆုံးပေါ်ကာကွယ်ဆေးများသေချာပေါက် ထိုးထားဖို့ ကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်များက အကြံပြုထားပါတယ်။ ခရီးသွားတိုင်း ဆုံဆို့နာ-မေးခိုင်-ကြက်ညှာချောင်းဆိုးရောဂါကာကွယ်ဆေး၊ ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေး၊ ပိုလီယိုကာကွယ်ဆေး၊ ဝက်သက်-လည်ပင်းအကြိတ်ရောင်ရောဂါ-ဂျိုက်သိုး (MMR) ကာကွယ်ဆေး နှင့် ပုံမှန်တုပ်ကွေးကာကွယ်ဆေးများ စတဲ့ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ် ကာကွယ်ဆေးများကို နောက်ဆုံးပေါ်ထိုးထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ထို့ပြင် ထိုင်းနိုင်ငံကို မဝင်ခင်မှာ သတ်မှတ်ထားတဲ့လူများကို ထိုးရမယ့် သတ်မှတ်ထားတဲ့ ကာကွယ်ဆေး အကြံပြုချက်တွေကို အောက်ကဇယားမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ပိုမိုသိရှိရန် www.cdc.gov မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
ခရီးသွားအားလုံး - မွေးကင်းစ ၆လ ကနေ ၁၁လ အရွယ်အထိ နိုင်ငံတကာခရီးသွားပါက ဝက်သက်-လည်ပင်းအကြိတ်ရောင်ရောဂါ-ဂျိုက်သိုး (MMR) ကာကွယ်ဆေးကို ခရီးမသွားခင် ထိုးထားရပါမယ်။ ဒီကာကွယ်ဆေးကို ကလေးဘဝပုံမှန်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်းအစီအစဉ်တွေရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်မသတ်မှတ်ထားပါဘူး။
အစားအစာ သို့ ရေမှ တစ်ဆင့် ညစ်ညမ်းမှုကြောင့် အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ အချို့သောဒေသများကို သွားရောက်လည်ပတ်မယ့် ခရီးသွားများအနေနဲ့ ငှက်ဖျားရောဂါ ကာကွယ်နိုင်တဲ့ သတ်မှတ်ထားသောဆေးဝါးတွေ ယူဆောင်သွားဖို့ CDC က အကြံပြုထားပါတယ်။ သင်ယူဆောင်သွားတဲ့ ဆေးအပေါ်မူတည်ပြီး ခရီးမသွားခင်ရက်ပေါင်းများစွာကြိုတင်၍သောက်သုံးရုံသာမက ခရီးစဉ်အတွင်းနဲ့ ခရီးစဉ်ကပြန်အရောက်မှာလည်းသောက်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဘယ်လို ငှက်ဖျားကာကွယ်ဆေးအမျိုးအစားကို ယူဆောင်သွားသင့်လဲဆိုတာ သင့်ရဲ့ ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပါ။
အသည်းရောင်ရောဂါ A ပိုး
ခရီးသွားအများစု - ထိုင်းနိုင်ငံသို့ သွားရောက်မယ့် ကာကွယ်ဆေးမထိုးထားတဲ့ တစ်နှစ်နဲ့ တစ်နှစ်အထက် ခရီးသွားများကို အကြံပြုပါတယ်။ မွေးကင်းစ ၆လ ကနေ ၁၁လ အရွယ်အထိ အသည်းရောင်ရောဂါ A ပိုးကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံသင့်ပါတယ်။ ဒီထိုးဆေးက ပုံမှန် ၂ခါ ထိုးဆေးအစဉ်မှာ ထည့်မတွက်ပါ။ ကာကွယ်ဆေးနဲ့ ဓာတ်မတည့်တဲ့ ခရီးသွားများနဲ့ ၆လအောက် ကလေးငယ်များအနေနဲ့ ဆေးပမာဏအပေါ်မူတည်ပြီး ၂ လလောက်အထိ ထိရောက်တဲ့ကာကွယ်မှုကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့ ဂလိုဗျူလင်း တစ်ကြိမ်ထိုးသင့်ပါတယ်။ ကာကွယ်ဆေးမထိုးထားတဲ့အသက် ၄၀ အထက်ခရီးသွားများ၊ ကိုယ်ခံစွမ်းအားကျဆင်းနေသူများ သို့မဟုတ် အန္တရာယ်များတဲ့ဒေသကို ၂ ပတ်အတွင်းသွားဖို့ရှိတဲ့ နာတာရှည်ရောဂါအခံရှိသူများအနေနဲ့ ကာကွယ်ဆေးကို ကနဦးအကြိမ် နဲ့ ဂလိုဗျူလင်းကို တစ်ကြိမ်တည်းမှာ ထိုးသင့်ပါတယ်။
ခရီးသွားအများစု - အထူးသဖြင့် သူငယ်ချင်းများ သို့ အမျိုးများနဲ့ နေထိုင်မယ့်ခရီးသွားများ သို့မဟုတ် သေးငယ်တဲ့မြို့များ သို့ တောရွာဒေသများသို့ သွားရောက်မယ့် ခရီးသွားအများစုကို အကြံပြုပါတယ်။
အချို့ခရီးသွားများ - ကာလဝမ်းရောဂါ ကူးစက်မှုမရှိတဲ့ ဒေသဖြစ်ရင် ကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့ အကြံမပြုပါဘူး။
အစားအစာ သို့ ရေမှ တစ်ဆင့် ညစ်ညမ်းမှုကြောင့် အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်၊ အထူးသဖြင့် ကူးစက်မှုရှိနေဆဲဖြစ်တဲ့ ဒေသတွေမှာဖြစ်ပါတယ်။
အသည်းရောင်ရောဂါ B ပိုး
အချို့သောခရီးသွားများ - ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ခရီးသွားမယ့် ကာကွယ်ဆေးမထိုးရသေးတဲ့ ခရီးသွားအသက်အရွယ်အားလုံးအတွက် အကြံပြုပါတယ်။
အသည်းရောင်ရောဂါ B ပိုးကို လိင်ဆက်ဆံမှုကနေလည်း ကူးစက်နိုင်သလို ညစ်ညမ်းတဲ့ အပ်တွေနဲ့ အခြားသွေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကနေလည်း ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။
အချို့သော ခရီးသွားများ - ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင်ရောဂါရှိတဲ့ ဒေသတစ်ခုကို ရွှေ့ပြောင်းပြီး ၁လနဲ့ အထက်စသည်ဖြင့် အချိန်အကြာကြီးနေမယ့် ခရီးသွားများ၊ ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင်ရောဂါရှိတဲ့ ဒေသများသို့ မကြာခဏခရီးသွားရသူများအတွက် အကြံပြုပါတယ်၊ ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင်ရောဂါရှိတဲ့ ဒေသများမှာ ၁ လအောက်ပဲ နေပေမယ့် တောရွာဒေသများသို့ လည်ပတ်ခြင်း၊ တောင်တက်ခြင်း သို့ စခန်းချခြင်း၊ သို့မဟုတ် ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင်ရောဂါရှိတဲ့ ဒေသများကို ဂဃနဏမသိဘဲ သွားလာပြီး လေအေးပေးခြင်း၊ အကာအကွယ်များ သို့ အိပ်ယာခြင်ထောင်များ မရှိတဲ့နေရာများမှာ နေခြင်း သို့ မြို့ပြဒေသများသို့ ရေတိုခရီးသွားဖို့ စီစဉ်သူတွေ သို့ ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင်ရောဂါ ရာသီ မရှင်းလင်းသေးတဲ့ ဒေသတွေကို ခရီးသွားလာမယ့်သူတွေအတွက် ဘယ်လောက်ကြာကြာနေသင့်တယ်လို့ အကြံမပြုထားတာတွေ စတဲ့ ကူးစက်မှုအန္တရာယ်မြင့်မားစေတဲ့ လှုပ်ရှားသွားလာမှုတွေကို ပြုလုပ်မယ့်သူတွေအတွက် ကာကွယ်ဆေးကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ဖက်ပိုင်းမှာတင်မက တောင်ဖက်ပိုင်းက ပင်လယ်ကမ်းခြေဒေသတွေမှာလည်း ကူးစက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ တင်ပြထားပါတယ်။
အချို့ခရီးသွားများ - ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ပုံမှန်အားဖြင့် ခွေးရူးရောဂါစွဲကပ်နေတဲ့ ခွေးများကို တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိနေတုန်း သင့်အနေနဲ့ ခွေး သို့မဟုတ် အခြားနို့တိုက်သတ္တဝါ တစ်ကောင်ကောင် ကိုက်တာ သို့မဟုတ် ခြစ်မိတာ ခံရတယ်ဆိုရင် ခွေးရူးပြန်ရောဂါကုထုံးတွေ ရရှိနိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ သင့်အနေနဲ့ ခွေးတွေ သို့မဟုတ် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်တွေရှိတဲ့ အနားမှာ လှုပ်ရှားသွားလာမှုတွေ လုပ်ဖို့ရှိတယ်ဆိုရင် ခရီးမသွားခင် ခွေးရူးပြန်ကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့ စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ တောတွင်းဒေသတွေကို သွားရောက်လည်ပတ်မယ့် စခန်းချသူတွေ၊ စွန့်စားသွားလာသူတွေ သို့ လှိုဏ်ဂူရှာဖွေသူတွေ၊ တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်တွေ၊ တိရစ္ဆာန်ထိန်းကျောင်းသူတွေ၊ ကွင်းဆင်းဇီဝပညာရှင်တွေ သို့မဟုတ် တိရစ္ဆာန်နမူနာတွေကို ကိုင်တွယ်ရတဲ့စမ်းသပ်ခန်းအလုပ်သမားတွေ စတဲ့ ခရီးသွားတွေအနေနဲ့ ခွေးရူးပြန်ရောဂါရှိနေတဲ့ တိရစ္ဆာန်တွေနဲ့ ကြုံတွေ့ရနိုင်ပြီး ကလေးတွေအနေနဲ့ ခွေး သို့မဟုတ် အခြားတိရစ္ဆာန်တွေရဲ့ ကိုက်မိတာ သို့ ခြစ်မိတာကို ခံရနိုင်ခြေရှိတဲ့ အတွက် ထိုင်းနိုင်ငံကို ကလေးတွေအနေနဲ့ အလည်သွားမယ်ဆိုရင် ခွေးရူးပြန်ကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့ စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။
ခွေးရူးပြန်ရောဂါက ထိုင်းနိုင်ငံမှာ အဓိကအန္တရာယ်တစ်ခုမဟုတ်ပေမယ့် အချို့သောတိရစ္ဆာန်တွေဖြစ်တဲ့ လမ်းဘေးခွေးနဲ့ ကြောင်တွေမှာ တွေ့ရတတ်ပါတယ်။
အချို့ခရီးသွားများ - YF ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှု အန္တရာယ်ရှိတဲ့ တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ လေဆိပ်မှာ ၁၂ နာရီနဲ့အထက် အကူးအပြောင်းရှိခဲ့သူတွေအပါအဝင် YF ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှု အန္တရာယ်ရှိတဲ့ တိုင်းပြည်ကနေ ခရီးသွားမယ့်သူတွေနဲ့ အသက် ၉လအထက် ခရီးသွားတွေအတွက် လိုအပ်ပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ Yellow fever ကူးစက်နိုင်ခြေအန္တရာယ်ကတော့ လုံးဝမရှိပါဘူး။ သို့ပေမယ့် ထိုင်းနိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့ တခြားကူးစက်နိူင်ခြေရှိသော နိုင်ငံတွေကနေလာတဲ့ ခရီးသွားအားလုံးဆီက Yellow fever ကာကွယ်ဆေးထိုးထားကြောင်း သက်သေကို လိုအပ်ပါတယ်။ အကယ်၍ သင်က အဲ့ဒီခရီးသွားတွေထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်နေမလား စစ်ဆေးနိုင်ဖို့ အောက်က စာရင်းကနေ ကြည့်ပါ။
ငှက်ဖျားရောဂါ - ထိုင်းနိုင်ငံကို ခရီးသွားတဲ့အခါ ငှက်ဖျားရောဂါကို ကာကွယ်ဖို့ ခြင်ကိုက်မခံသင့်ပါဘူး။ သင့်အနေနဲ့ ဘယ်ကိုသွားမယ်၊ ဘယ်အချိန်မှာသွားမယ်နဲ့ အပြင်မှာအချိန်အများကြီးကုန်မယ် သို့ အပြင်မှာအိပ်မယ် စတဲ့ ခရီးသွားအစီအစဉ်အပေါ်မူတည်ပြီး ခရီးမသွားခင်၊ သွားနေစဉ်နဲ့ ခရီးစဉ်အပြီးမှာလည်း ငှက်ဖျားရောဂါကို ကာကွယ်ဖို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဆေးဝါးတွေကို သောက်သုံးသင့်ပါတယ်။ ခရီးသွားစဉ် ငှက်ဖျားရောဂါကို ဘယ်လိုကာကွယ်နိုင်မလဲဆိုတာကို သင့်ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးပါ။ ငှက်ဖျားရောဂါအန္တရာယ်ရှိတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ ဒေသများ - အဓိကအားဖြင့် မြန်မာ၊ ကမ္ဘောဒီးယားနဲ့ လာအိုနယ်နိမိတ်နှင့် ထိစပ်နေသော ဒေသများနှင့် Kalasin၊ Krabi (Plai Phrai)၊ Nakhon Si Thammarat၊ Narathiwat၊ Pattani၊ Phang Nga (ဖန်ငမြို့အပါအဝင်)၊ Rayong ၊ Sakon Nakhon ၊ Songkhla ၊ Surat Thani နှင့် Yala အထူးသဖြင့် အဆိုပါပြည်နယ်များ၏ ကျေးလက်တောရွာနှင့် သစ်တောအစွန်းပိုင်းဒေသများ။ Krabi ခရိုင်ရဲ့ အခြားအပိုင်းများနှင့် ဘန်ကောက်၊ ချင်းမိုင်၊ ချင်းရိုင်၊ Koh Phangan၊ Koh Samui နှင့် Phuket မြို့များအပါအဝင် ထိုင်းနိုင်ငံ၏အခြားဒေသများတွင် ဖြစ်ပွားမှုရှားပြီး နည်းပါတယ်။
Krabi ခရိုင် (Koh Phi Phi, Koh Yao Noi, Koh Yao Yai, and Ko Lanta) နှင့် Pattaya City ကျွန်းများတွင် မရှိပါ။ ထိုင်းနိုင်ငံရှိ ငှက်ဖျားရောဂါအကြောင်း အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ကြည့်ရှုပါ။ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ ငှက်ဖျားရောဂါ
ထိုင်းနိုင်ငံပြည်ဝင်ခွင့်အတွက် လိုအပ်ချက်တွေက သင့်မူလတိုင်းပြည်အပေါ်မူတည်ပြီး ကွဲပြားပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ဝင်ရောက်ရန် ဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့်ဆိုင်ရာ နောက်ဆုံးစည်းမျဥ်းများအရ ယနေ့ကနေ ၂၀၂၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့အထိ အကျုံးဝင်သော အောက်ဖော်ပြပါ နိုင်ငံ/နယ်မြေများရဲ့ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုင်ဆောင်သူများအနေဖြင့် ဗီဇာမလိုဘဲ ခရီးသွားခြင်းရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ၄၅ ရက်အထိ ဝင်ရောက်နေထိုင်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုက်ရောက်ဗီဇာများအတွက် ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၃၁ရက်နေ့အထိ ထပ်မံဆိုင်းငံ့ထားပါတယ်။
တခြားနိုင်ငံများအနေနဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံကို ဝင်ရောက်နိုင်တဲ့ ဗီဇာလျှောက်ဖို့ သင့်အနားမှာရှိတဲ့ ထိုင်းသံရုံးကို ဆက်သွယ်ပါ။
***ထိုင်းနိုင်ငံကို ဝင်ရောက်မယ့် နိုင်ငံခြားသားခရီးသွားများအားလုံး ပါရှိရမယ့်အရာတွေကို မှတ်သားထားပါ။
၁။. ပြည်ဝင်ခွင့်အထောက်အထား (COE)
၂။. မထွက်ခွာခင် ၇၂နာရီအတွင်း ထုတ်ထားတဲ့ လေယာဉ်ဖြင့်ခရီးသွားဖို့ သင့်တော်တဲ့ အထောက်အထား
၃။. မထွက်ခွာခင် ၇၂နာရီအတွင်း ထုတ်ထားတဲ့ RT-PCR အသုံးပြုပြီး စစ်ဆေးထားတဲ့ COVID-19 မရှိကြောင်း ဓာတ်ခွဲဆေးစစ်ချက်ပါတဲ့ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအထောက်အထား
၄။. Alternative State Quarantine (ASQ) ၁၄ရက် ကြိုတင်အတည်ပြုမှု
၅။. အနည်းဆုံး အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ သန်းအထိ အကျုံးဝင်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေစဉ်တစ်လျှောက် COVID-19 ကုသမှုအတွက် မကန့်သတ်ထားတဲ့ ဆေးနဲ့ ခရီးသွားအာမခံ
၆။. ဆိုက်ရောက်မှုမတိုင်မီ လိုအပ်တဲ့ အခြားစာရွက်စာတမ်းများ
ပိုမိုသိရှိဖို့ ဝင်လေ့လာပါ။ www.thaiembassy.org
ထိုင်းအကောက်ခွန်ဌာန - လေဆိပ်ခရီးသည်များအတွက် လမ်းညွှန်ချက်များ click ( Link )
ဘန်ကောက်ကို ခရီးသွားဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တာနဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံအကြောင်းနဲ့ သင့်ခရီးစဉ်ကို ဘယ်လိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်နိုင်မလဲဆိုတာကို ပိုမိုလေ့လာချင်ပါလိမ့်မယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံခရီးသွားအာဏာပိုင်အဖွဲ့ရဲ့ website က လေ့လာဖို့အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်ပြီး ကျယ်ပြန့်တဲ့ ခေါင်းစဉ်တွေ ပါဝင်ပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ ရာသီဥတုကို ဘယ်လို မျှော်လင့်ထားရမလဲ။
ထိုင်းနိုင်ငံကို ခရီးသွားခြင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မကြာခဏမေးလေ့ရှိသော မေးခွန်းများ
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် မူးယစ်ဆေးဝါး (Link) နှင့် စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသော (Link) မူးယစ်ဆေးဝါးများကို တားမြစ်ထားပါတယ်။
VitalLife မှာချိန်းဆိုမှုအတည်ပြုပြီးတာနဲ့ ကျွန်ုပ်တို့ medical travel team မှလူကြီမင်းခရီးမထွက်လာခင် သိဖို့ လိုအပ်တဲ့အရေးကြီးသတင်းအချက်အလက်အစုံကို ပို့ပေးမည်ဖြစ်သည်။ လူကြီးမင်းရဲ့ဆေးကုသရေးခရီးစဉ်အတွက် ကောင်းမွန်စွာကြိုတင်ပြင်ဆင်နိုင်ရန် အောက်ပါ ခရီးသွားရာတွင်စစ်ဆေးရမည့်အချက်အလက်များစာရင်းကို တစ်ချက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးပါ။
အပိုင်း ၁။ လေကြောင်းဖြင့်သွားလာခြင်း
ယေဘုယျအားဖြင့်, သင့်မှာ အောက်ဖော်ပြပါအခြေအနေရှိနေပါက, လေကြောင်းဖြင့်သွားလာရန် တားမြစ်ထားပါသည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် ၃၆ ပတ်ကျော်အကြာ (သို့မဟုတ် နှစ်မြွာပူး၊ သုံးမြွှာပူး ကဲ့သို့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပြီးနောက် ၃၂ ပတ်ကြာ)
လတ်တလော နှလုံးဖောက်မှု သို့မဟုတ် လေဖြတ်မှု ရှိထားခြင်း၊ သို့မဟုတ် ခွဲစိတ်မှုတစ်ခုခုခံယူထားခြင်း အထူးသဖြင့် အစာအိမ်၊ ဦးနှောဏ်၊ မျက်လုံး၊ အရိုးခွဲစိတ်မှု(အရိုးနဲ့ အရိုးဆစ်)၊ အစာအိမ် မျက်လုံး ဦးခေါင်းထိခိုက်မှုအတွက် ခွဲစိတ်မှုခံယူထားခြင်း။ ခရီးသွားဖို့ အန္တရာယ်ကင်းနိုင်မယ့်အချိန်ကို မိမိဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပါ။
နှလုံးခုန်စက်၊ နှလုံးပြန်လည်ချိန်ညှိကုထုံးစက် (CRT)၊ အစားထိုးထည့်သွင်းရသော cardioverter defibrillators (ICD) စက်ကဲ့သို့ နှလုံးအတွက်စက်များထည့်ထားပါက လေကြောင်းဖြင့်မလာခင် မိမိဆရာဝန်နဲ့ ကြည့်ရှုစစ်ဆေးပါ။ မိမိတစ်ကိုယ်ရေသုံး စက်အသိအမှတ်ပြုကတ်ကို မိမိနဲ့ တပါတည်း အချိန်တိုင်း ဆောင်ထားဖို့ မမေ့ပါနဲ့။
၂ ပတ်နဲ့ အထက် တုပ်ကွေးကဲ့သို့ လက္ခဏာရှိခြင်း၊ တီဘီမရှိသော်လည်း ရေရှည်ချောင်းဆိုးခြင်း၊ ဝိတ်ကျခြင်း၊ ညဘက်ချွေးစေးပြန်ခြင်း၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း၊ ဖျားခြင်း၊ ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း ကဲ့သို့ တီဘီလက္ခဏာများဖြစ်ခြင်း။ ဒီလိုတွေ့ကြုံနေရပါက ခရီးမသွားဖို့ အပြင်းအထန် အကြံပေးချင်ပြီး ထိုလက္ခဏာများ အပြီးတိုင်မပျောက်မချင်း ဂရုတစိုက်ကုသနေပေးပါ။
အောက်ဖော်ပြပါ လက္ခဏာတွေကို ခံစားနေရပါက အန္တရာယ်ကင်းစွာ ခရီးသွားလာနိုင်မည့်အချိန် သိနိုင်ရန် မိမိ ဆရာဝန်နဲ့ ပြသစစ်ဆေးပါ။
တခြားသူတွေကို လွယ်ကူစွာပျံ့နှံ့နိုင်သော ရောဂါတစ်ခုခုရှိခြင်း
ပြင်းထန်သော အသက်ရှုလမ်းကြောင်း၊ နား၊ နှာခေါင်း ပိုးဝင်ခြင်း
၁၀၀ ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက် သို့ ၃၈ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ် နဲ့အထက် အဖျားရှိခြင်း
ပွန်းပဲ့ခြင်း သို့ သွေးထွက်ခြင်း (ဒဏ်ရာဟောင်းမရှိ)
ကား၊ရထား၊လေယာဉ် မူးခြင်း မှအပ နာတာရှည်အော့အန်ခြင်း( လှုပ်ရှားဖျားနာမှုမှလွဲ)
မိမိ ဆေးဝါးများအားလုံး လက်ဆွဲခရီးဆောင်အိတ်ထဲ ထည့်ထားပါ။
ရေဓာတ်ခန်းခြောက်မှုကိုကာကွယ်နိုင်ရန် သို့မဟုတ် သလိပ်မကပ်စေရန်နှင့် စိုစွတ်မှုအားနည်းတဲ့လေယာဉ်ခန်းအတွင်း ရင်ခေါင်းရှင်းစေရန် ရေများများသောက်ပါ။
၄ နာရီနဲ့အထက် ဝေးကွာတဲ့ လေကြောင်းခရီးအတွင်း မလှုပ်မရှားနေရတဲ့အခါ သွေးကြောပိတ်ဆို့မှု ဖြစ်နိုင်တာကြောင့် လေယာဉ်ဝန်ထမ်းများမှ သတ်မှတ်ထားသော နေရာအတွင်း မတ်တပ်ရပ် လမ်းလျှောက်ခြင်းကို ပြုလုပ်ပေးပါ။ သွေးလည်ပတ်မှုကိုကောင်းမွန်စေရန် ပုံမှန်အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအကြား (ဥပမာ မိနစ်သုံးဆယ်ခြားတစ်ခါ) ခြေထောက်တွေကို ကွေးဆန့်ပြီးလှုပ်ရမ်းပေးပါ။ https://www.cdc.gov/ncbddd/dvt/travel.html
တကယ်လို့ သင့်မှာ သွေးကြောပိတ်ဆို့မှုဖြစ်နိုင်ချေ ပိုများပါက လေယာဉ်စီးရာမှာ လိုက်နာဖို့လိုအပ်မဲ့ နည်းလမ်းတွေကို သင်ဆရာဝန်တွေ ကူညီပြောပြပါလိမ့်မယ်။ aspirin, anticoagulants နဲ့ ခြေထောက်အောက်ပိုင်း သွေးလည်ပတ်မှုကို ကောင်းစေတဲ့ ခြေအိတ်တို့ပါနိုင်ပါတယ်။
လေယာဉ်စီးနေချိန်အတွင်း အောက်စီဂျင်လိုအပ်ခဲ့ပါက ဒါကိုကြိုတင်တောင်းခံနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့လက်ရှိကျန်းမာရေးအ‌ခြေအနေနဲ့ အောက်စီဂျင်လိုအပ်ရခြင်းအကြောင်းအရင်းကို ဆေးဖက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်စာရွက်တွင်ဖြည့်စွက်ရေးသားပြီး လေကြောင်းလိုင်းကိုပေးပို့ရပါမည်။ လေကြောင်းလိုင်းမှာ လက်ခံအတည်ပြုနိုင်ဖို့ ၃ ရက်မှ ၅ ရက်အတွင်းကြာနိုင်ပါတယ်။
အပိုင်း ၂။ ကြိုတင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း ပြင်ဆင်ခြင်း
ခွဲစိတ်မှု တစ်ခုခု သိုမဟုတ် ဆေးဝါးတစ်ခုခု သုံးစွဲသောက်သုံးနေရပါက ကျွန်ုပ်တို့ဆီ မလာခင် မိမိ ပြသနေကျ ဆရာဝန်ကို အကြောင်းကြားပေးပါ။
aspirin၊ Persantin®၊ Ticlid®၊ Plavix®၊ warfarin၊ Orfarin®၊ heparin၊ Fraxiparine®၊ ဆေးဖက်ဝင်ဖြည့်စွက်စာများ၊ ဗီတာမင်များ အထူးသဖြင့် ဗီတာမင်အီးတို့ကို သောက်သုံးနေရပါက ဆေးကုသမှုမခံယူခင် အနည်းဆုံး တစ်ပတ်အလိုတွင် ရပ်တန့်ရန် သို့ မိမိဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း ရပ်တန့်ပေးပါ။
နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာ ရောဂါ၊ ဆီးချို၊ သွေးပေါင်ချိန်တက်ခြင်း၊ ပန်းနာရင်ကြပ်၊ ကင်ဆာ သို့မဟုတ် တခြားသော ဆေးဝါး ဓာတ်မတည့်မှုများ၊ မိမိ လတ်တလော ရောဂါကုထုံးနဲ့ သက်ဆိုင်သော ရောဂါများအတွက် သုံးစွဲနေရသည့်ဆေးဝါးများအတွက် သမားတော်ကို ကြိုတင်အကြောင်းကြားပေးပါ။
သင့်ကိုထိရောက်မှုရှိစွာနဲ့ အကျိုးရှိစွာကုသပေးနိုင်ရန် သင်မဆိုက်ရောက်မီ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာမေးခွန်းများကို ဖြည့်စွက်ပေးပါ။
၁။. မိမိ သွားရောက်လိုသည့်နိုင်ငံအတွက် ဗီဇာလိုအပ်မှု ရှိမရှိနဲ့ မိမိနိုင်ငံကူးလက်မှတ် သက်တမ်းကုန်မကုန် စစ်ဆေးပါ။
၂။. သင့်ရဲ့ ဆေးကုသကုန်ကျစရိတ်အတွက် အကြွေးဝယ်ကတ် သို့မဟုတ် ငွေသားကဲ့သို ပေးချေနည်းထဲမှ မည်သည့်နည်းဖြင့်ပေးချေမလဲ ဆုံးဖြတ်ပြီး ပြည်တွင်းသုံးငွေသား ထပ်ဆောင်းဆောင်ထားပေးပါ။ ဘဏ် သို့မဟုတ် ကတ်အာမခံကုမ္ပဏီကိုဆက်သွယ်ပြီး သင်အနေနဲ့ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ ငွေကြေးအမြောက်အမြားသုံးစွဲနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း အကြောင်းကြားထားပါ။ ဒါဟာ မလိုလားအပ်တဲ့ သံသယဖြစ်ခံရကာ အကောင့်ပိတ်ခံရခြင်းကို ကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
၃။. ဆေးခန်း၊ ခရီးစဉ် စီစဉ်ပေးမည့်သူ၊ လူနာအကူတို့ကို ဆက်သွယ်ရမည့်အချက်အလက်များအားလုံး ရှိထားပါ။
၄။. ဆေးကုသမှုခရီးစဉ်ကြောင့် အလုပ်တွင် မရှိနိုင်ကြောင်း အလုပ်ရှင်ကို အကြောင်းကြားထားပါ။
၅။. ဘန်ကောက်ရဲ့ မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်များကို လေ့လာပြီး ကိုယ်တိုင်ပြင်ဆင်ပါ။
၆။. နိုင်ငံရပ်ခြားရောက်နေစဉ် အိမ်အတွက် အကူစီစဉ်ထားပါ။
၇။. တချို့သောကာကွယ်ဆေးများ ထိုးထားရန် လိုအပ်မှု ရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။
၈။. ဆေးခန်းတွင် ကြိုတင်ချိန်းဆိုမှုများ သတိတရပြုလုပ်ပေးရန်နှင့် လိုအပ်ပါက ကြိုတင်ချိန်းဆိုကြေး‌ပေးဆောင်ပါ။ နေ့စွဲတွေကို နှစ်ခါပြန် စစ်ဆေးပါ။
၉။. သင်တော်တဲ့ လေယာဉ်လက်မှတ်ကို ဝယ်ယူပါ။ လေဆိပ်မှာ လာကြိုပေးနိုင်မယ့်သူရှိအောင် စီစဉ်ပါ။
၁၀။. လက်သည်းခွံအရောင်ဟာ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို လေ့လာရာတွင် အထောက်အကူပြုတာကြောင့် လက်သည်းခြေသည်းဆိုးထားပါက ဖယ်ရှားပေးပါ။
၁။. အားသွင်းကြိုးနဲ့အတူ မိုဘိုင်းဖုန်း
၂။. မှတ်ပုံတင်ကတ်၊ ပတ်စ်ပို့၊ ဗီဇာ စသဖြင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာစာရွက်စာတမ်းများ
၃။. Credit/debit card၊ မှန်ကန်တဲ့ ပြည်တွင်းသုံးငွေသားအနည်းငယ်ထပ်ဆောင်း ဆောင်ထားပါ။
၄။. လက်ရှိ ကုသနေဆဲဆေးစစ်တမ်းအပါအဝင် ဆေးကုသမှုမှတ်တမ်း၊ ဖလင်များ (X-ray, MRI, CT scan, ultrasound)၊ ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးမှုရလဒ်များနဲ့ သင့်ကို ဆက်သွယ်နိုင်မယ့် လိပ်စာ
၅။. နေ့စဉ်သုံးဆေးဝါးများ (နဂိုမူရင်းထုတ်ပိုးမှုပုံစံအတိုင်းဖြင့် ရှိပါက ထိုအတိုင်းယူခဲ့ပေးရန်)၊ နာတာရှည်ရောဂါများရှိပါက သူနဲ့ပက်သက်သည့် အချက်အလက်များ
၆။. ဆေးကုသမှု ခရီးစဉ်အတွင်း အနားယူရာနှင့် အပန်းဖြေရာတွင် သုံးနိုင်သည့်ပစ္စည်းများ (ဥပမာ စာအုပ်၊ မဂ္ဂဇင်းနဲ့ သီချင်းနားထောင်စက်)
၇။. ညအိပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့ ဆေးကုသမှုခရီးစဉ်ဖြစ်ပါက သက်သောင့်သက်သာရှိတဲ့ ညအိပ်ဝတ်စုံ၊ ရေချိုးဝတ်ရုံတို့ဆောင်ခဲ့ပါ။ ဥပမာ ဒူးခေါင်းခွဲစိတ်မှုအတွက် ချိန်းဆိုပါက ညအိပ်ရာတွင် ဘောင်းဘီရှည်အစား ဘောင်းဘီတိုဝတ်ဖို့ အကြံပြုထားပါတယ်။ ပခုံးအတွက် ခွဲစိတ်ကုသပါက ဇစ်ပါကုတ်အင်္ကျီ ယူဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
၈။. သက်သောင့်သက်သာဖြစ်တဲ့ အတွင်းခံများနဲ့ ခြေအိတ်များ
၉။. ဆေးခန်းအတွင်း လမ်းလျှောက်နိုင်ရန်အတွက် ဖိနပ်၊ တကယ်လို့ သင်ဟာ ပလပ်စတစ်ဆာဂျရီ သို့မဟုတ် တခြားသော ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်းဆာဂျရီ လုပ်ဆောင်ရမည်ဆိုပါ ဖိနပ်ပါးယူခဲ့ပေးပါ။ အရိုးပိုင်းဆိုင်ရာ ကုထုံးတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ ခြေထောက်စီးရန် ပိုမိုခိုင်ခံ့တဲ့ အားကစားဖိနပ်လိုအပ်နိုင်သည်ကို သတိပြုပါ။
၁၀။. ဆပ်ပြာ၊ ခေါင်းလျှော်ရည်၊ သွားတိုက်ဆေး၊ သွားတိုက်တံ၊ ချွေးနံ့ပျောက်ဆေး၊ ခေါင်းဘီး၊ သန့်ရှင်းရေးသုံးလက်သုပ်ပဝါ၊ မုတ်ဆိပ်ရိတ်ကိရိယာအစုံ၊ ခေါင်းစည်းကြိုး၊ နှုတ်ခမ်းနီအဆီ၊ မျက်နှာသစ်‌ဆေး အစရှိတဲ့ အခြေခံရေချိုးခန်းသုံးပစ္စည်းများ
၁၂။. ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူပြီးနောက် လိုအပ်ပါက ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံးနဲ့ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက် အားကစားဝတ်စုံနဲ့ ဖိနပ်တစ်စုံပါဝင်တဲ့ ဝတ်စရာတစ်စုံ။
၁၃။. ဆေးကုသမှုခရီးရည်ရွယ်ချက်ကို များစွာမူတည်ပြီး ရှုခင်းများကိုလည်ပတ်ကြည့်ရှုနိုင်တာကြောင့် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးအဝတ်အစားနဲ့ သက်သောင့်သက်သာရှိတဲ့ဖိနပ်တွေကို ယူလာခဲ့ပေးပါ။ သို့သော် တင်ပါးအစားထိုးခြင်းကဲ့သို့ ရွေ့လျားမှုကို သက်ရောက်တဲ့ ခွဲစိတ်မှုမျိုးလုပ်ဆောင်မည်ဆိုပါက သက်သောင့်သက်သာရှိ လျော့တိလျောရဲ့ ဘောင်းဘီ၊ ကုတ်အင်္ကျီနဲ့ ဆွဲဆန့်နိုင်တဲ့ ဘောင်းဘီတိုမျိုးကို ယူဆောင်ခဲ့ပေးဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။
၁၄။. ညအိပ်ရာတွင် လိုအပ်နိုင်မယ့် နားကြပ်၊ ညအိပ်ဝတ်ရုံနဲ့ သင်ကြိုက်နှစ်သက်လေ့ရှိတဲ့ ခေါင်းအုံးအသေး
Coface မှ ဖော်ပြထားတဲ့ နိုင်ငံအန္တရာယ်အကဲဖြတ်ဆန်းစစ်မှုကို ကြည့်ရှုပါ။
လက်ရှိ ရာသီဥတုကိုသိရှိနိုင်ရန် Click here
သင်နဲ့ သင့်မိသားစု ကျွန်ုပ်တို့ဝန်ထမ်းများနှင့် အတူတကွ ပူးပေါင်းပါဝင်ပေးမယ်ဆိုရင် ပိုကောင်းမွန်တဲ့ ဆေးကုသမှုဝန်ဆောင်ကို ပေးဆောင်နိုင်ပါတယ်။ လူနာဖြစ်တဲ့ သင့်အနေနဲ့ ရသင့်ရထိုက်တဲ့ ရပိုင်ခွင့်များအားလုံးကို အကြုံပြုရသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့တာဝန်ဖြစ်သကဲ့သို့ သင်ကိုယ်တိုင်သည်လည်း ကုသဖို့နဲ့ ဂရုစိုက်ဖို့ တာဝန်ရှိပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ ဆေးကုသမှုအစီအစဉ်တလျှောက် မေးခွန်းမေးဖို့၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့၊ တက်ကြွဖို့ ကျွန်ုပ်တို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။ မေးခွန်းနဲ့ စိုးရိမ်မှုများရှိပါက ဝန်ထမ်း သို့မဟုတ် မန်နေဂျာတစ်ယောက်ယောက်ဖြင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
ဆေးရုံမှာ ရှိနေစဉ်အတွင်း လူနာတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ သင်အနေနဲ့ တချို့သောရပိုင်ခွင့်တွေရှိပါတယ်။
၁။. လူနာအနေနဲ့ မူဝါဒကြမ်းတွင်ဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကျွမ်းကျင်သူတွေထံမှ လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုမရှိဘဲ ဆေးကုသမှုကိုခံယူနိုင်တဲ့ အခြေခံရပိုင်ခွင့်တွေရှိပါတယ်။
၂။. အရေးပေါ် အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေမှလွဲ၍ သဘောတူညီဖို့ မဆုံးဖြတ်ရသေးခင် လူနာအနေနဲ့ ဖျားနာမှု၊ စစ်ဆေးမှု၊ ကုသမှု၊ အကျိုးကျေးဇူးနဲ့ အန္တရာယ်တွေနဲ့ပက်သက်တဲ့ မှန်ကန်ပြီးလုံလောက်မှုရှိတဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေကို ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူတွေထံမှာ သင့်လျော်တဲ့ဘာသာစကားဖြင့် ရရှိနိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးရှိပါတယ်။
၃။. အသက်အန္တရာယ် စိုးရိမ်ရတဲ့အနေအထားရှိတဲ့ လူနာဆိုပါက ကျန်းမာရေးစောင့်‌ရှောက်မှုပညာရှင်များထံမှ အကူအညီတောင်းခံစရာမလိုဘဲ ချက်ချင်းဆေးကုသခံယူနိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။
၄။. လူနာအနေနဲ့ မိမိကို ကုသပေးမယ့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူ၏ အမည်နှင့် ကျွမ်းကျင်မှုကို သိရှိပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။
၅။. လူနာအနေနဲ့ တခြားသော ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ရေးပညာရှင်တွေရဲ့အမြင်ကို မေးပိုင်ခွင့်ရှိပြီး တခြားကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူတစ်ယောက်နဲ့ လဲပေးရန် သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးအာမခံတွင်ပါဝင်တဲ့ သဘောတူညီချက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ တခြားသော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဆောက်အအုံသို့ပြောင်းပေးရန် တောင်းဆိုခွင့်ရှိပါတယ်။
၆။. သဘောတူညီမှုလက်ခံရယူချိန်နှင့် ကျန်းမာရေး‌စောင့်ရှောက်မှုပညာရှင်များမှ ဆေးဖက်ဆိုင်ရာအကျိုးကျေးဇူးများကို ပေးစွမ်းနိုင်ရန် အချက်အလက်များကိုသိရှိဖို့လိုအပ်ချိန်မှလွဲ၍ လူနာအနေနဲ့ဆေးကုသမှုအချက်အလက်များကို လျို့ဝှက်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။
၇။. human subject research တွေမှာ ပါဝင်ဖို့ မဆုံးဖြတ်ခင် လူနာအနေနဲ့ အလုံးစုံသောအကြောင်းအရာများကို အကြောင်းကြားမှုအားခံယူခွင့်ရှိပါတယ်။
၈။. တခြားသူတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်ကိုမချိုးဖောက်မချင်း လူနာအနေနဲ့မိမိ ဆေးကုသမှုမှတ်တမ်းအချက်အလက်အတွက် ဆေးရုံရဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနဲ့အညီ တောင်းဆိုပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။
၉။. တကယ်လို့ လူနာဟာအသက်၁၈ နှစ်အောက်ဖြစ်ပါက သို့မဟုတ် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမသန်စွမ်းပါက မိဘတစ်ယောက်ယောက် သို့မဟုတ် ဥပဒေအရအုပ်ထိန်းသူဖြစ်သူက ရပိုင်ခွင့်များကိုကျင့်သုံးပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။
သင့်မှာ မေးခွန်းများ၊ စိုးရိမ်မှုများ၊ မှတ်ချက်များရှိပါက
အောက်ဖော်ပြပါ ဆက်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းတစ်ခုခုကို အသုံးပြုပြီးဆက်သွယ်ပေးပါ။
၁။. ကျွန်ုပ်တို့ ဝန်ထမ်းကို တိုက်ရိုက်ပြောပါ။ (ကုသနေသော သူနာပြု သို့မဟုတ် ဆရာဝန်)
၂။. လူနာတုံ့ပြန်မှုကဒ်အပေါ်မှာ သင့်ရဲ့မှတ်ချက်တွေကိုရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ဝန်ထမ်းတွေထဲကတစ်ယောက်ကိုပေးပါ သို့မဟုတ် ဆေးရုံတစ်ဝိုက်တွင်ထားရှိသော အကြံပြုလွှာသေတ္တာများထဲထည့်ပါ။
၃။. Contact Center ကို ဆက်သွယ်ပါ။ ( ဆေးရုံအတွင်းအတွက်ဆိုပါက "00”ကိုနှိပ်ပြီး အပြင်မှဆိုပါက 0-2066-8888 ကိုနှိပ်ပါ)
၄။. [email protected] သို့ အီးမေလ်ပို့ပါ။
၁။. လူနာအနေနဲ့ ဆေးစစ်တမ်း သို့မဟုတ် ကုသမှုလုပ်ငန်းစဉ်အကြောင်း အသိပေးသဘောတူညီချက်တွင် လက်မှတ်မထိုးမီ ဖြစ်နိုင်ချေရှိ အန္တရာယ်များနှင့် အချက်အလက်များအား မေးမြန်းရန်တာဝန်ရှိသည်။
၂။. လူနာအနေနဲ့ သက်ဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပညာရှင်များကို မှန်ကန်ပြီး ပြည့်စုံတဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ တခြားသောအချက်အလက်များကို ပေးရန် တာဝန်ရှိသည်။
၃။. လူနာအနေနဲ့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနဲ့ပက်သက်ပြီး ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပညာရှင်တွေရဲ့ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်နှင့် လိုက်နာရန် တာဝန်ရှိပြီး လိုက်နာရန် အဆင်မပြေမှုများရှိပါက ကြိုတင်အကြောင်းကြားရမည်။
၄။. လူနာအနေနဲ့ အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးရုံစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအတိုင်း လိုက်နာရန်နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်တာဝန်ရှိသည်။
၁။. လူနာအနေနဲ့ အာမခံကုမ္ပဏီမှ ပြန်အမ်းငွေအတွက် ကျသင့်ငွေပြေစာကို ဆေးရုံမှ ရသည်နှင့် တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံး ပြည့်စုံပြီးမှန်ကန်တဲ့ အချက်အလက်ကို ပေးရမည်။
၂။. လူနာအနေနဲ့ ကြိုတင်မှာကြားလွှာ၊ သေတမ်းစာ မိတ္တူနှင့် လိုလားသော ဆေးကုသမှုပုံစံအတွက် ရေးသားဆုံးဖြတ်ချက်တို့ကို ပေးရန်တာဝန်ရှိသည်။
၃။. လူနာအနေနဲ့ ဆေးကုသမှုပိုင်းဆိုင်ရာချိန်ဆိုမှု သို့မဟုတ် ပြန်လည်ချိန်းဆိုရန်လိုအပ်လာပါက ဆေးရုံသို့အကြောင်းကြားရန် တာဝန်ရှိသည်။
၄။. တိုင်ကြားချက်ကိုဖြေရှင်းရန် လူနာအနေနဲ့ ဆေးရုံစီမံခန့်ခွဲမှုကိုယ်စားလှယ်ဖြင့် တိုက်ရိုက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် တာဝန်ရှိသည်။
၅။. လူနာအနေနဲ့ ဆေးရုံမှာနေထိုင်စဉ်အတွင်း လိုအပ်သည့် တစ်ကိုယ်ရေသုံးပစ္စည်းများကိုသာသယ်ဆောင်လာရမည်။ တန်ဖိုးကြီးပစ္စည်းများမပါ။
၆။. လူနာအနေနဲ့ အန္တရာယ်ကင်းစေရန်အတွက် ဆေးရုံမှသက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်၊ သူနာပြုတို့၏ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ဆေးရုံအဆောက်အအုံမှ ထွက်သွားခွင့်မရှိပါ။
၇။. လူနာအနေနဲ့ ဆေးရုံမှစီစဉ်ထားသော ဆေးကုသမှုနဲ့ သူနာပြုစောင့်ရှောက်မှုကိုသာယူခွင့်ရှိပြီး ဆေးရုံမှ ညွှန်ကြားခြင်းမရှိဘဲ တခြားသူတစ်ယောက် သို့မဟုတ် ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ပြုလုပ်ခွင့်မရှိ။
၅။. လူနာအနေနဲ့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပညာရှင်များ၊ တခြားလူနာများ၊ ဧည့်သည်များကို ရိုသေလေးစားသမှုဖြင့် ဆက်ဆံရမည်။
၆။. လူနာအနေနဲ့ ကျန်းမာရေးအာမခံအကျိုးခံစားခွင့်များကို သင့်လျော်သော စာရွက်စာတမ်းများဖြင့် ဆေးရုံသို့ ပေးပို့ရမည်။
၇။. လူနာအနေနဲ့ အောက်ဖော်ပြပါအချက်များကို သတိထားရန် တာဝန်ရှိသည်။
၁။. စံနှုန်းနှင့်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ အလေ့အကျင့်များအတိုင်း ကျင့်သုံးနေသော ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပညာရှင်များကို ဥပဒေမှ ကာကွယ်ထားပြီး မတရားသော စွပ်စွဲမှုများမှ ကာကွယ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
၂။. လက်ရှိ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်များကို ညွှန်းဆိုတဲ့ ဆေးဝါးစောင့်ရှောက်မှုများသည် လူနာအတွက် အန္တရာယ်ထက် အကျိုးကျေးဇူးပိုများစေသည့် သိပ္ပွံနည်းကျ သက်သေအထောက်အထားများကို အခြေခံထားသည်။
၃။. ဆေးဝါးစောင့်ရှောက်မှုသည် ရောဂါနဲ့ အခြေအနေများအားလုံးကို မဖော်ထုတ်နိုင်၊ မကာကွယ်နိုင်၊ မကုသနိုင်ပါ။
၄။. မည်သည့်ဆေးဝါးစောင့်ရှောက်မှုမဆို သက်ဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပညာရှင်များ လွန်စွာဂရုစိုက်ထားတာတောင် မမျှော်လင့်ထားတဲ့ အကျိုးဆက်တွေရှိလာနိင်ပါတယ်။
၅။. ရောဂါစစ်ဆေးရေ၊ ရှာဖွေရေးနှင့် ကုသမှု စောင့်ကြည့်ရေးများတွင် နည်းပညာအကန့်အသတ်ရှိပြီး လက်ရှိစံနှုန်းများနဲ့ ထိန်းချုပ်မရနိုင်သည့်အတွက် မတိကျနိုင်တဲ့ရလဒ်များ ရှိကောင်းရှိနိုင်သည်။
၆။. ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပညာရှင်တွေအနေနဲ့ ပေးထားတဲ့အခြေအနေနဲ့ ကန့်သတ်ချက်တွေအတွင်း အထောက်အထားအခြေပြုဆေးကုသမှုဆိုင်ရာရွေးချယ်မှုကို ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိပြီး လူနာနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်း သို့မဟုတ် သင့်တော်သလိုလွဲပြောင်းပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
၇။. ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပညာရှင်များအနေဖြင့် အသက်အန္တရာယ်မစိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေရှိလူနာနှင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်း သို့မဟုတ် လွဲပြောင်းပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
၈။. ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပညာရှင်သည် လူနာဆီမှ လိုအပ်တဲ့ ကျန်းမာရေးအချက်အလက်တွေကို မရရှိခဲ့ပါက ထိုဆေးဝါးစောင့်ရှောက်ကုသမှုသည် စိတ်မချရနိုင်ပါ။
၉။. အရေးပေါ်အခန်းသည် အရေးပေါ်အခြေအနေနှင့် အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရသူ လူနာများအတွက်သာဖြစ်သည်။
ကိုယ်ထိလက်ရောက်ကျူးလွန်မှု၊ နှုတ်ဖြင့်ချိန်းခြောက်မှု သို့မဟုတ် ဆေးရုံဝန်ထမ်းများကို ချိန်းခြောက်မှုများကို လက်ခံမည်မဟုတ်ပါ။ ဆေးရုံဝန်ထမ်းများအပေါ် အကြမ်းဖက်မှုကျူးလွန်တဲ့မည်သူမဆို တရားစွဲဆိုခံရမည်ဖြစ်ပြီး ဆေးရုံဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုခွင့်ပိတ်ပင်မည်ဖြစ်ပါမည်။
ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့်ရင်ဆိုင်နေရပါက သို့မဟုတ် စောင့်ရှောက်မှု ရွေးချယ်ခွင့်တွေနဲ့ပက်သက်ပြီး မေးခွန်းများရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ VitalLife ကျင့်ဝတ်ကော်မတီမှ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပေးနေပါတယ်။ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်မှုရယူဖို့ +6620668899 သို့ ဆက်သွယ်ပြီး ကျင့်ဝတ်ကော်မတီမှာ တာဝန်ရှိသူတစ်ယောက်ယောက်နှင့် ပြောဆိုခွင့်ပေးဖို့ ကိုယ်စားလှယ်ကို တောင်းဆိုလိုက်ပါ။
VitalLife ဆီသို့ သွားရောက်ခြင်း
VitalLife ဆီသို့ကြွမြန်းလာတဲ့ နိုင်ငံတကာဧည့်သည်များကို ကမ္ဘာ့အဆင့်မှီ ဝန်ဆောင်မှုများပေးစွမ်းဖို့ ကျွန်ုပ်တို့အသင့်ရှိနေပါတယ်။ လူနာတစ်ဦးချင်းစီအတွက် လိုအပ်တဲ့သီးသန့်ဝန်ဆောင်မှုများကို ဘန်ကောက်သို့သင်ဆိုက်ရောက်တာနဲ့ စတင်ဆောင်ရွက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဘမ်ရွမ်ဂရက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဆေးရုံကြီးရဲ့ လုပ်ငန်းခွဲ အဖြစ် ပေါင်းစပ်ဝန်ဆောင်မှုတွင် VitalLife မှ သင် သုဝဏ္ဏဘူမိအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်သို့ရောက်သည်နှင့်တပြိုင်နက် သင့်အားကူညီဆောင်ရွက်ပေးရန် လေဆိပ်ကိုယ်စားပြုအဖွဲ့ တစ်ခု ထားရှိပေးထားပါတယ်။ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ custom check စစ်ဆေးမှုများအပြီးတွင် ကျေးဇူးပြု၍ ထွက်ပေါက် B နှင့် C ( သင့်ရဲ့ခရီးဆောင်အိတ် ရယူသောနေရာ ပေါ်မူတည်၍ ) ကိုဆက်သွားကာ ဂိတ် 10 အထိဆက်လျှောက်လာပါ။ ပုံပါအတိုင်း ဘမ်ရွမ်ဂရက် လေဆိပ်ကောင်တာ ဟာ ဆိုက်ရောက် Hall ရဲ့ ထွက်ပေါက် C တစ်ဖက်ခြမ်းတွင်တည်ရှိပါတယ်။ (ပိုမိုသိရှိလိုပါက)
သင့်လေဆိပ်ကိုယ်စားလှယ်မှ အောက်ပါအတိုင်းသင့်ကို ကူညီနိုင်ပါတယ်။
ဘမ်ရွမ်ဂရက် မှ သင့်ရောက်ရှိမှုအတွက် shuttle van ဝန်ဆောင်မှုများ (တစ်ကြောင်း) စီစဉ်ပေးခြင်း။
ဆိုက်ရောက်ချိန်တွင် သင့်ရဲ့ appointment က်ကို ပြောင်းလဲပေးခြင်း။
ဆိုက်ရောက်ချိန်တွင် hotel တည်းခိုခန်း ကြိုတင်နေရာယူပေးထားခြင်း
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သုဝဏ္ဏဘူမိ လေဆိပ်မှ ဘမ်ရွမ်ဂရက် သို့မဟုတ် ဆေးရုံနှင့်အနီး ဟိုတယ်များသို့ ကျွန်ုပ်တို့မှ အခမဲ့ shuttle Van ဝန်ဆောင်မှုပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ reservation အတွက် [email protected] ကို ကျေးဇူးပြု၍ တစ်ရက်ကြိုတင် တောင်းဆိုပေးပို့ဖို့ပြောကြားလိုပါတယ်။ (လူနာမှ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဆရာဝန်နှင့် ကြိုတင်ချိန်းဆိုမှုရှိထားရန်လိုအပ်ပါတယ်။) Shuttle Van ရဲ့ထွက်ခွာချိန်ကတော့ အနှံ့အပြားဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ယာဉ်အသွားအလာအခြေအနေပေါ်မူတည်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သုဝဏ္ဏဘူမိ လေဆိပ်တွင် ရွေးချယ်စရာ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပုံစံအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ အောက်ပါ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ပုံစံတို့ကိုနှစ်သက်ရာရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
သုဝဏ္ဏဘူမိ နှင့် ဒုန်မွာအန်းကြား အခမဲ့လေဆိပ် အသွားအပြန်ဘတ်စ်ကား
လေဆိပ်ဂိတ်များနှင့် အများသုံးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး စင်တာကြား လေဆိပ်တွင်းအခမဲ့အသွားအပြန် ဘတ်စ်ကား
ထိုင်းနိုင်ငံ၏ အကြီးမားဆုံး မြို့တွင်းဘတ်စ်ကားစနစ် ဖြစ်သော ဘန်ကောက် လူထုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဘတ်စ်ကားလိုင်း
ဒုန်မွှာအန်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်တွင် သင်ရွေးချယ်စရာ အများသုံးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး မြောက်များစွာရှိပါတယ်။
ဘန်ရွတ်ဂယက် ကိုကိုယ်တိုင်သွားချင်ပါက လေဆိပ်မှ အငှားယာဉ်ရှာဖို့ ကျွန်ုပ်တို့မှ အကြံပြုလိုပါတယ်။ ပင်မဂိတ်အဆောက်အဦးရဲ့ မြေညီထပ်တွင် အငှားယာဉ်တန်းလျားရှိပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရရင်တော့ တန်းစီတာကရှည်နိုင်ပေမယ့် သင့်အလှည့်ကိုအတော်လေး မြန်မြန်ဆန်ဆန်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ သင်လိုရာခရီးကို တက္ကစီတန်းလျားကဝန်ထမ်းဆီ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းသာ ပြောပြလိုက်ပါ။ ဘမ်ရွမ်ဂရက်ကိုတန်းတန်းမတ်မတ်ရောက်ရှိဖို့အတွက်ဆိုမပူပါနဲ့ ကျွန်ုပ်တို့ဆေးရုံနာမည်က ဘန်ကောက်မှာလူသိများပါတယ်။
ဘန်ကောက်တွင် တက္ကစီကားသမားအားလုံးဟာ မီတာနှင့်မောင်းနှင်ကြပြီး ယာဉ်စီးခကတော့ ၃၅ ဘတ်မှ စပြီးရှိပါတယ်။ တက္ကစီကိုလေဆိပ်မှငှားလာခြင်းအတွက် အပိုကြေး ဘတ်၅၀ ရှိပြီး လမ်းခရီးဆုံးမှ ယာဉ်မောင်းသူကိုပေးအပ်နိုင်ပါတယ်။ မြင့်မားသောအဝေးပြေးလမ်းမကြီးက သင့်အား ဘမ်ရွမ်ဂရက်နှင့်အနီးဆုံးဖြစ်တဲ့ ဘန်ကောက်မြို့ရဲ့ နှလုံးအိမ်ကိုခေါ်လာမှာဖြစ်တာကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့မှသင့်အားလေဆိပ်မှလာရင်အဝေးပြေးလမ်းကိုအသုံးပြုဖို့ အကြံပြုပါတယ်။
အကယ်၍ သင်ဟာ တက္ကဆီကို လေဆိပ်မှ ဒါမှမဟုတ် ဘန်ကောက်အနီးတဝိုက် မည်သည့်နေရာမှမဆို ငှားယူမယ်ဆိုရင်တော့ ယာဉ်မောင်းများဟာ ပြန်အမ်းငွေ ပုံမှန်ယူဆောင်လေ့မရှိကြတာကြောင့် ဘတ် ၁၀၀ ငွေစက္ကူလောက် ဆောင်ထားနိုင်ရင် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဘန်ကောက်မြို့မှာတော့ တက္ကစီ ဆရာတွေက ဘောက်ဆူးပေးတာကို ကျေးဇူးတင်စွာလက်ခံကြပါတယ်။ လေဆိပ်မှ ဘန်ရွန်ဂယက်အထိခရီးအတွက် ဘတ်၂၀ ဟာ သင့်တော်တဲ့ ဘောက်ဆူးငွေဖြစ်ပါတယ်
VitalLife ဆီသို့ လာရောက်ရန် လမ်းညွှန်ချက်များနှင့် မြေပုံများ
ဘမ်ရွမ်ဂရက်ဆေးရုံဧရိယာအတွင်းတည်ရှိသော လက်အောက်ခံဠာနခွဲတစ်ခုဖြစ်သည့် VitalLife Scientific Wellness Center သည် သင်တို့၏ကျန်းမာရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေမည့် ကိုယ်ပိုင်သီးသန့်ဆေးဝါးများကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရန်သာမက အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းကိုတွန်းလှန်နိုင်ရန်နှင့် ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ရန် လက်ဦးမှုနည်းလမ်းများကိုပေးစွမ်းဖို့ကြိုးစားလျှက်ရှိပါသည်။ နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်နီးပါးလက်တွေ့လေ့လာခဲ့ကြပြီး နိုင်ငံတကာဆေးပညာရပ်ဝန်းတွင်အတွေ့အကြုံရှိပြီးဖြစ်သောကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များမှာ လူနာကုသမှုမှတ်တမ်းစဥ်များတွင်အောင်မြင်ခဲ့ကြသည်ကိုလည်းသက်သေပြနိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ .
ဆေးရုံမဆင်းမီနဲ့ ဆေးရုံဆင်းပြီးချိန်တွငိ ဘာတွေ မျှော်မှန်းထားရမလဲ ?
ဆေးရုံဆင်းချိန်ဟာစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းပြီး တစ်ချိန်တည်းမှာပဲစိတ်ဖိစီးစေနိုင်ပါတယ်။ ဆေးရုံဆင်းခြင်းကိစ္စနှင့် ဆေးရုံဆင်းပြီးနောက် မျှော်လင့်ရမည့်အရာများကို သင့်အား နားလည်စေရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့မှ ဤလမ်းညွှန်ချက်ကို ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သင်ထွက်သွားပြီးနောက်တွင်လည်း ကုသခြင်းဟာ ရပ်တန့်သွားမှာမဟုတ်ပဲ သင်ပြသတဲ့ ဆရာဝန်ရဲ့ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အကြံဉာဏ် များအတိုင်းလိုက်နာဖို့လည်းအရေးကြီးကြောင်း သတိပြုရန်လိုအပ်ပါတယ်။
VitalLife တွင် လူနာများကို ဆေးရုံဆင်းခွင့်မကျမီ သမားတော်ကြီးများနှင့်ဦးစွာ စစ်ဆေးခြင်းပြုလုပ်မည် ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဟာဆေးရုံဆင်းရန်အတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဆိုတာကိုသေချာစေရန် ဆေးရုံဆင်းခွင့်စာကို မှတ်တမ်းတင်၍ ဆေးရုံမှမထွက်ခွာမီ သင့်ရဲ့ဆေးမှတ်တမ်းများတွင် ဖိုင်တွဲပေးရမည်ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင်ဟာ သင့်နေရပ်နိုင်ငံ ဒါမှမဟုတ်အခြားခရီးပန်းတိုင်ကို လေကြောင်းဖြင့်သွားရောက်ဖို့ လိုအပ်တယ်ဆိုလျှင် သင်ဟာ သင့်ရဲ့ဆရာဝန်ကို ခရီးသွားနိုင်သောဆေးလက်မှတ် နှင့်အတူ နိုင်ငံရပ်ခြားတွင်လိုအပ်မယ့် ဆေးဝါးစာရင်း ကိုမေးမြန်းအတည်ပြုဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ထိုခရီးသွားဆေးလက်မှတ်ဟာဆိုလျှင်တော့ စတင် ထုတ်ပေးသည့်နေ့မှစ (၇) ရက်အထိသာ တရားဝင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ခရီးသွားအစီစဉ်မပြုလုပ်မီ အောက်ပါတို့ကိုကျေးဇူးပြု၍ သေချာအောင်လုပ်ထားရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
သင်ပြသနေသော သမားတော်ကို ဆေးမှတ်တမ်းများအကျဉ်းချုပ်၊ ဓာတ်ခွဲခန်းဆေးစစ်ချက်များနှင့် ဓာတ်မှန်အဖြေများ ကို မေးမြန်းတောင်းယူထားပါ။
သင့်ဆေးခန်း၊ ပို့ဆောင်ပေးသူ နဲ့လူနာအကူတို့အား ဆက်သွယ်ရန်အချက်လက်များကို စုဆောင်းထားပါ။
သင်ပြသနေသော သမားတော်နှင့် သူနာပြုကို သင့်ရဲ့ခရီးစဉ်ကို အသိပေးပါ။
ရောဂါရှာဖွေခြင်းနှင့် ကုသခြင်းအားလုံးကိုငြင်းဆိုသော သာမန်လူနာများနှင့် ခရီးသွားလူနာ အပြင်လူနာ၊ အတွင်းလူနာအပါအဝင် တို့သည် ဆေးရုံ၏မူဝါဒအရ 'ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များကိုငြင်းဆန်ခြင်းသဘောတူညီချက်' တွင်လက်မှတ်ရေးထိုးပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
သင်ဆေးရုံဆင်းချိန်မှာ ဆရာဝန်ပေးတဲ့ ပညာပေးဆိုင်ရာရင်းမြစ်တွေနဲ့ လမ်းညွှန်ပြသချက်တွေကို နားလည်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ အောက်ပါစာရင်းတွင် သင်ဆေးရုံဆင်းချိန်မှာ ယူဆောင်သွားရမယ့်အရေးပါသော အချက်တချို့ ပါဝင်ပါတယ်။
ဆရာဝန်မှပေးသော ဆေးဝါးများအကြောင်းကို နားလည်သဘောပေါက်ထားရပါမယ်။
ကျန်းမာရေးအခြေအနေအပေါ် သက်ရောက်မှုမရှိစေရန်၊ သက်ရောက်နိုင်သော စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးပြဿနာများကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ရန်နှင့် ရပ်ကျေးရင်းမြစ်များကိုအသုံးချနိုင်ရန် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လိုက်ရောညီထွေ ရှိဖို့ရာ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ရပါမယ်။
ကုသမှုပန်းတိုင်ကို နားလည်သဘောပေါက်ပြီး ကိုယ်တိုင်ရောဂါလက္ခဏာများကို သတိပြု ၍ သိသာထင်ရှားတဲ့ လက္ခဏာများကို မည်သည့်အချိန်တွင် သမားတော်နှင့် သူနာပြုတို့အား အသိပေးရမယ်ဆိုတာကိုသိရှိရပါမယ်။ လူနာများမှ မည့်သည့်အရေးပေါ်အခြေအနေများကို မဆို ဆေးရုံမရောက်မှီ ကိုယ်တိုင်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ရန်ထိ လုံလောက်တဲ့အသိပညာ ရှိရပါမယ်။
မိမိ ကျန်းမာရေးအနေအထားမှ ကန့်သတ်ချက်များနှင့် သက်ရောက်မှု တို့ကဲ့သို့ ကိုယ်ပိုင်ကျန်းမာရေးအခြေအနေများကို နားလည်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်။ လူနာများဟာ နေ့စဉ်လူမှုဘဝလှုပ်ရှားမှုများကို လုပ်ဆောင်နိုင်ရမှာဖြစ်ပြီး ကျန်းမာရေးအရကန့်သတ်ချက်များကို ရင်ဆိုင်ခြင်း၊ပြန်လည်ထူထောင်ရာတွင် ကူညီခြင်း နဲ့ နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများဖြစ်ခြင်းမှအကာအကွယ်ပေးနိုင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
လူနာများမှ နောက်ဆက်တွဲ ချိန်းဆိုမှုများရဲ့ အရေးပါပုံကို နားလည်သိရှိရပါမယ်။ လူနာများမှ အရေးပေါ်အခြေအနေတွင်အကူအညီတောင်းခံရန်လိုအပ်ကြောင်းနားလည်ထားရမည်။ ထို့အတူကုသမှုရလဒ်အကြောင်း နှင့် အခြားသောဌာနများတွင်အသုံးချနိုင်သော ကုသမှုအစီအစဉ်များကိုသိရှိထားရန်လိုအပ်ပါမည်။
မိမိ၏ကျန်းမာရေးအခြေအနေအတွက် အကောင်းဆုံး အာဟာရရှိသောအစားအသောက်များကို ရွေးချယ်ရာတွင် အကျွမ်းတဝင်ရှိရမည်ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ဆေးကုသမှုများကိုအခြားသောကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးရာနေရာများတွင်ဆက်လက်ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပါက လူနာကိုဆေးရုံမှဆင်းခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ပြီး ဘမ်ရွမ်ဂရက်ဆေးရုံကြီးမှပေးခဲ့သောကုသမှုမှတ်တမ်းအကျဥ်းကိုပါပေးအပ်မည်ဖြစ်သည်။ ထိုမှတ်တမ်းအကျဥ်းကိုသမားတော်မှထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပီး ဆေးရုံဆင်းသည့်အခါတာဝန်ကျသူနာပြုမှလူနာထံပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
ဆေးရုံဆင်းပြီးချိန်တွင် ဆေးကုသမှုအခြေအနေ နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ဝန်ဆောင်မှုအတွက် စိတ်ကျေနပ်မှုရရှိခြင်း ရှိမရှိ နောက်ဆက်တွဲဆောင်ရွက်ခြင်းအနေဖြင့် လူနာများကို ဘန်ရွန်ဂရက်မှ ဆက်သွယ်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ညှိနှိုင်းပါရဂူများနှင့် ယဉ်ကျေးမှုပိုင်းဆိုင်ရာ အထောက်ကူပြုအရာရှိများမှ နောက်ဆက်တွဲလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန် ဆက်သွယ်ရန်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ သူနာပြုများထံ ပေးပို့ပေးထားပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်။
ကျန်းမာရေး အတွေ့အကြုံအတွက် စိတ်ကျေနပ်မှုရလဒ်အဆင့်
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများကို နေ့စဉ်တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သောကြောင့် ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုအပေါ် သင့်တုံ့ပြန်မှုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့အစည်းအတွက် အလွန်တန်ဖိုးရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ (Link)
လူနာ၏ငွေရေးကြေးရေးနှင့် အာမခံအတွက် သတင်းအချက်အလက်များ
Vitallife Wellness Center တွင် လူကြီးမင်းတို့စိတ်ကျေနပ်အားရစေမယ့် ဝန်ဆောင်မှုအတွေ့အကြုံတွေကိုခံစားစေနိုင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ရည်ရွယ်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုန်ကျစရိတ် မူဝါဒမှာ ပွင့်လင်းမြင်သာပြီး လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအဆင့်ဆင့်အလိုက်ခန့်မှန်းခြေကုန်ကျစရိတ်များကိုလည်းမျှဝေပေးပါတယ်။ စောင့်ရှောက်ကုသမှုပုံစံကို မိမိစိတ်ကြိုက်လိုအပ်သလိုညှိယူနိုင်တာကြောင့် ဧည်သည့်တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက်ကုသမှုကုန်ကျစရိတ်များမှာ မတူညီနိုင်ပါ။ ခန့်မှန်းခြေကုန်ကျစရိတ်သည် ကုန်ကျနိုင်မည့်ပမာဏအပိုင်းအခြားကိုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပြီး ကုသမှုအတွက်အတိအကျသတ်မှတ်ထားသောကုန်ကျစရိတ်ဟု မယူဆနိုင်ပါ။ ကုသမှုမတိုင်ခင်နှင့် ကုသပြီးနောက် ကုန်ကျစရိတ်များ၊ ကုသနေစဉ်ထပ်တိုးလာသောနောက်ဆက်တွဲရောဂါများ၊ ကြိုမသိနိုင်သောရောဂါအခံများနှင့် အိမ်တွင်ဆက်လက်သောက်သုံးရမည့်သောက်ဆေးများမှာ ခန့်မှန်းခြေကုန်ကျစရိတ်တွက်ချက်ရာတွင် မပါဝင်ပါ။ ထိုစရိတ်များကို ဆေးရုံဆင်းမည့်နေ့တွင် ဧည့်သည်မှပေးဆောင်ရန်တာဝန်ရှိပါသည်။ ကြားနေအဖွဲ့အစည်းမှ ပေးဆောင်မည်မဟုတ်သည့် ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ်များအတွက်လည်း ဆေးရုံဆင်းမည့်နေ့တွင် ဧည့်သည်မှပေးဆောင်ရန်တာဝန်ရှိပါသည်။
ကိုယ်တိုင် ငွေပေးချေမည့် ဧည့်သည်များအနေနဲ့ ကုသမှုအဆင့်ဆင့်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်များနှင့် ကုန်ကျမှုပမာဏကြီးမားသည့် မည်သည့်ကုသမှုများကိုမဆို ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ဧည့်သည်နှင့်ဦးစွာတိုင်ပင်ပြီးမှသာ ကုသမှုစတင်လေ့ရှိပါတယ်။ Medical Check Up အပါအဝင် ကုသမှုအဆင့်ဆင့်တိုင်းအတွက် စရံငွေအပြည့်ပေးချေရမည်ဖြစ်ပြီး ခန့်မှန်းထားသည့် ကနဦးစရံအပ်ငွေသည် အထွေထွေဆေးရုံတက်ရောက်မှုများအတွက်လည်း လိုအပ်နိုင်ပါတယ်။ စရံအပ်ငွေပိုနေပါက ကုသမှုအဆင့်များပြီးစီးသွားတာနဲ့ ပိုငွေကိုဧည့်သည်အားပြန်လည်အပ်နှံသွားမည်ဖြစ်ပါတယ်။ သတ်မှတ်ထားသောကုသမှုများရုတ်တရက် ဒါမှမဟုတ်အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ဖျက်သိမ်းခဲ့ရပါကလဲ စရံငွေအပြည့်ပြန်လည်ပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ငွေပေးချေမှုကို အကြွေးဝယ်ကတ်ဖြင့် ချေမည်ဆိုပါက ငွေပြန်အမ်းမှုကို အကြွေးဝယ်ကတ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ငွေပြန်အမ်းသည့်နေ့ ငွေကြေးလဲလှယ်နှုန်းဖြင့်တွက်ချက်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ ငွေပေးချေမှုသည် ငွေသား/လက်ငင်းဖြစ်ပါက ငွေပြန်အမ်းမှုကို ငွေသား သို့မဟုတ် ငွေလွဲခြင်းဖြင့်ပြန်လည်ပေးဆောင်မည်ဖြစ်သည်။ ကြေးနန်းဖြင့်ငွေပြန်အမ်းမှုသည် ဘဏ်ဝန်ဆောင်ခ၊ ငွေကြေးလဲလှယ်နှုန်းနှင့် ဘဏ်၏ငွေကြေးဝယ်ယူ၊ ရောင်းချနှုန်းထား ကွာခြားမှုတို့ဖြင့် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်။
လူကြီးမင်းတို့ရွေးချယ်နိုင်မည့် များစွာသော ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။
ငွေသား၊ credit card နှင့် debit card ဖြင့် ပေးချေမှုကို လက်ခံပါတယ်။ Cashier Cheque မှ လွဲ၍ ချက်လက်မှတ်ဖြင့် ပေးချေခြင်းကို လက်မခံပါ။
နိုင်ငံခြားမှဆိုပါက ကြေးနန်းဖြင့် ငွေပေးချေခြင်းကို ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
ဘဏ်အမည် Bangkok Bank Public Co., Ltd.
ဘဏ်လိပ်စာ 11/1 Soi Nana Nua, Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok 10110, Thailand
ဘဏ်ဖုန်းနံပါတ် +66 2253 4496
ပေးချေရမည့်သူ Vitallife Corporation Limited.
ကုမ္ပဏီလိပ်စာ 68 Sukhumvit Soi 1, Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok 10110 Thailand
ငွေလွဲဝင်ရောက်မှုကို ချက်ချင်းလက်ငင်းအကြောင်းပြန်နိုင်ရန် ကျေးဇူးပြု၍ ဧည့်သည်ဖြစ်သူ၏အမည်၊ ဆေးရုံနံပါတ်ကို Pay-in Slip တွင် တိတိကျကျဖော်ပြပေးပါရန်။ ငွေလွဲမှုပြီးသည်နှင့် ကျေးဇူးပြု၍ SWIFT MT103 အသိပေးမှုနှင့် ဖက်စ် သို့မဟုတ် အီးမေးလ်ဖြင့် ဆေးရုံသို့ပေးပို့ရန်အတွက် ဘဏ်ကိုမေးမြန်းပေးပါ။
ရုံး၏ ဖက်စ်နံပါတ်၊ အီးမေးလ်လိပ်စာ
ငွေရှင်းကောင်တာ +66 2011 4229 [email protected]
E-Payment: ကျွန်ုပ်တို့ Vitallife Wellness Center မှ ဧည့်သည်များ ငွေပေးချေမှုအဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်အတွက် အခြားသောနည်းလမ်းတစ်ခုအနေနဲ့အွန်လိုင်းငွေပေးချေနည်းစနစ်ကိုလည်း ပြင်ဆင်ထားရှိပါတယ်။ ထိုအွန်လိုင်းငွေပေးချေမှုဟာ လုံခြုံစိတ်ချရပြီး လျှင်မြန်တိကျတာကြောင့် ဧည့်သည့်များ၊ ဆွေမျိုးသားချင်းများ၊ မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ ကုမ္ပဏီသို့ ကိုယ်တိုင်လာစရာမလိုဘဲ စရံငွေသွင်းခြင်း၊ ငွေပေးချေခြင်းများပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ထိုသို့ပေးချေမှုအတွက် ဝန်ဆောင်ခပေးရန်လည်းမလိုအပ်ပဲအွန်လိုင်းမှ ငွေပေးချေမည့်ဧည့်သည်များအနေနဲ့ ငွေရှင်းကောင်တာသို့ အကြောင်းကြားပေးရန်သာ လိုအပ်ပါတယ်။ ထို့နောက် အွန်လိုင်းငွေပေးချေရန်လင့်ခ် ကို ငွေပေးချေသူ ဧည့်သည်၊ ဆွေမျိုးသားချင်း၊ မိတ်ဆွေတို့၏ အီးမေးလ်လိပ်စာသို့ ပို့ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသို့ပေးချေမှုအတွက် VISA သို့မဟုတ် MasterCard နှင့်သာရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Western Union ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Western Union အနေနဲ့ လူတစ်ဦးမှတစ်ဦးဆီသို့ တစ်နေ့တည်း သို့မဟုတ် နောက်တစ်ရက်အတွင်း အပြီးလုပ်ဆောင်နိုင်မယ့် ငွေလွဲဝန်ဆောင်မှုမျိုး (ဝန်ဆောင်ခအပါအဝင်) ကိုလုပ်ဆောင်ပေးနေပါတယ်။ သူ့မှာ တစ်ကမ္ဘာလုံးအနှံကိုယ်စားလှယ်များရှိပါတယ်။
Credit Card Pre-Authorization. လူကြီးမင်းရဲ့ ဆွေမျိုးသားချင်းများ၊ မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ သူတို့၏ credit card တွေကိုအသုံးပြုစေလိုပါက လိုအပ်တဲ့စာရွက်စာတမ်းများပေးပို့ရန်၊ မှတ်တမ်းကူးယူရန် သက်ဆိုင်ရာဌာနသို့ လူကိုယ်တိုင်လာရောက်စရာမလိုဘဲ Vitallife Wellness Center ကို တောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်။
အသုံးပြုလို့ရနေဆဲ credit card ရှေ့ဘက်နှင့်နောက်ကျော မိတ္တူ လိုအပ်မည်ဖြစ်ပြီး မိတ္တူမှာပါဝင်တဲ့ security code (ရှေ့ဂဏန်း ၃ လုံး) ကိုအတိအကျဖော်ပြပေးပြီး မှန်ကန်မှုရှိကြောင်း ‘Correct Copy’ဟု ရေးသားကာလက်မှတ်ထိုးပေးပါ။
အသုံးပြုလို့ရနေဆဲ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မိတ္တူ၊ ဓာတ်ပုံပါဝင်သည့် မှတ်ပုံတင်/ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်တို့ လိုအပ်မည်ဖြစ်ပြီး မှန်ကန်မှုရှိကြောင်း‘Correct Copy’ဟုရေးသားကာ လက်မှတ်ထိုးပေးပါ။
Vitallife Wellness Center ကို လိပ်မူပြီး သင်၏ credit card ကို အသုံးပြုနိုင်ကြောင်းသဘောတူလွှာရေးပို့ပေးပါ။ ရေးရမည့်နမူနာပုံစံမှာ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်အနေနဲ့ ကိုယ်ပိုင် အကြွေးဝယ်ကတ်ဖြစ်သော credit card နံပါတ် _____, လျို့ဝှက်ကုတ် (ရှေ့ဂဏန်းသုံးလုံး) ____, သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်: ......................... ဦး၊ ဒေါ်၊ မ၊ ကို ___ ဖြစ်သူ၏ ဆေးကုသစရိတ်ကို ပေးချေရန် : .................................................. ဆေးရုံနံပါတ် (HN): .............................. ဆေးကုသစရိတ် (ငွေပမာဏ)
.............................. (လက်ရေးဖြင့် ဂဏန်းဖြင့်ရေးပါ) ခွင့်ပြုပါသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ အမည်နှင့် နေ့စွဲကိုလက်မှတ်ရေးထိုးပေးပါ။
*American Express နှင့် Diners Club credit card များကိုဤ ငွေပေးချေမှုအတွက် အသုံးပြုနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။
အွန်လိုင်းမှငွေပေးချေခြင်း သို့ ငွေလွဲခြင်းမှလွဲ၍ တခြားသော ငွေပေးချေမှုများအတွက် ငွေရှင်းကောင်တာရှိ ငွေကိုင် (Cashier) ကိုသာတိုက်ရိုက်ငွေပေးချေမှုပြုလုပ်ပါ။ Vitallife တွင် ဝန်ထမ်းများအား ဧည့်သည်၏ငွေကြေးဆိုင်ရာလွဲပြောင်းမှုအတွက် ဧည့်သည်ကိုယ်စားတာဝန်ယူလုပ်ဆောင်ရန်ခွင့်ပြုချက်မပေးထားပါ။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ဧည်သည့်မှကိုယ်ကိုယ်တိုင်/ မိသားစုဆွေမျိုး/ ကိုယ်စားလှယ်တို့ဖြင့် Vitallife ရုံးဝန်ထမ်းနှင့် ငွေပေးချေမှု ပြုလုပ်ခဲ့ပါက Vitallife အနေဖြင့်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးမည်မဟုတ်ပါ။
ငွေပေးချေမည့် ဘဏ်ပေါ်မူတည်၍ ငွေလွဲခြင်းပြီးမြောက်မှုဟာ ရက်အနည်းငယ်မှ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အထိ ကြာမြင့်နိုင်ပါတယ်။ ဝန်ဆောင်မှုကြန့်ကြာခြင်းမရှိစေရန် ကျေးဇူးပြု၍ ဘဏ်နှင့်ချိတ်ဆက်ကာ စုံစမ်းမေးမြန်းပါ။
ဧည့်သည်အနေနဲ့ ကြေးနန်းဖြင့် ငွေလွဲမည်ဆိုပါက ငွေကြေးလဲလှယ်နှုန်းနှင့် ဘဏ်ဝန်ဆောင်ခများကို မိမိကိုယ်တိုင်သာ ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ငွေလွဲပြောင်းမှုကိုဆေးကုသရန်တစ်ခုတည်းအတွက်သာ အသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုပါသည်။ ကျေးဇူးပြု၍တစ်ကိုယ်ရေသုံးစွဲရန်အတွက် ငွေလွဲပြောင်းခြင်းမပြုလုပ်ရ။
သင့်နိုင်ငံ ပြင်ပသို့မထွက်လာခင် credit card အတွက် ဘဏ်မှ တာဝန်ရှိသူကို အကြောင်းကြားပါ။ credit card သုံးစွဲနိုင်မှုပမာဏကို တိုးရန်လိုအပ်နိုင်သည့်အတွက် credit card သတ်မှတ်ပမာဏကို စစ်ဆေးပါ။ ကုမ္ပဏီမှ ပေးပို့ထားသည့် ခန့်မှန်းကုန်ကျငွေပမာဏကို ဘဏ်ကိုအသိပေးပါ။ သင့် credit card အား နိုင်ငံခြားတွင် အသုံးပြုသည့်အခါကျသင့်နိုင်မည့်အဖိုးအခများကိုပါအတည်ပြုစစ်ဆေးပါ။
ငွေကြေးလဲလှယ်နှုန်းသည် ပြည်တွင်းဘဏ်၏ပေါက်စျေးပေါ်တွင်မူတည်နိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ဧည့်သည်အနေနဲ့ credit card မှ ငွေပြန်အမ်းစေလိုပါက ထိုင်းဘတ်ငွေဖြင့် ပြန်အမ်းပေးမည်ဖြစ်ပြီး သင်အသုံးပြုသည့် ဘဏ်မှတစ်ဆင့် သင့်နိုင်ငံတွင်အသုံးပြုနေသောငွေကြေးစနစ်နှင့် ဘဏ်၏ငွေလဲလှယ်နှုန်း၊ ငွေကြေးဝယ်ယူ၊ ရောင်းချနှုန်းထားများအရ ပြန်လည်ပြောင်းလဲသွားမည်ဖြစ်သည်။
ထပ်ဆောင်းကုန်ကြငွေများသည် ဧည့်သည်၏ကျန်းမာရေးအခြေအနေနှင့် သမားတော်၏ကုသမှုအစီအစဉ်အပေါ်မူတည်ပြီး ထပ်မံကုန်ကျနိုင်ချေရှိပါသည်။ ကြားလူမှပေးဆောင်မည်မဟုတ်သောဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ်များကို ဧည့်သည်ကိုယ်တိုင်မှပေးဆောင်ရန်တာဝန်ရှိပါသည်။ ငွေပေးချေမှုကို ဆေးရုံဆင်းမှသာ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။
သင့်ကို သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆေးကုသမှုခရီးစဉ်အတွက်ရက်ချိန်းရယူနိုင်ရန် တပြားတချပ်မှ မကုန်ကျစေဘဲ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည့် ကိုယ်စားလှယ်ရုံးအသီးသီးကိုလည်းနိင်ငံအရပ်ရပ်မှာထားရှိပါတယ်။
ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ်များသည် စရံငွေထက်လျော့နည်းခဲ့ပါက ဧည့်သည်အနေဖြင့် ဆေးကုသမှုပြီးသည်နှင့် ငွေရှင်းကောင်တာသို့ဆက်သွယ်ပြီးငွေပြန်အမ်းရန်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
ဆေးကုသမှုဖျက်သိမ်းခဲ့ပါက ပြန်အမ်းငွေပမာဏအရမ်းမများလျင် ချက်ချင်းလက်ငင်းငွေပြန်အမ်းပေးမည်ဖြစ်ပြီး ငွေပမာဏများခဲ့ပါက နောက်အကျဆုံး နောက်တစ်နေ့တွင် ပြန်အမ်းပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ (ကျေးဇူးပြု၍ ငွေပြန်အမ်းခြင်းမရှိသည့်မူဝါဒကိုလည်း အောက်တွင်ဖတ်ရှုပေးပါရန်)
ဧည့်သည်မှစရန်ငွေပေးချေပြီးသည်နှင့် သံရုံးမှပေးပို့သည့် ကုသမှုအားလုံးအတွက်အကြုံးဝင်သော အာမခံစာရွက်ကို ကုမ္ပဏီမှလက်ခံရရှိပါမည်။ တကယ်လို့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသာ လက်ခံရရှိခဲ့ပါက အာမခံအပြည့်မရရှိခင်အချိန်အထိ စရန်ငွေအချို့ကိုသာ သိမ်းဆည်းထားမည် ဖြစ်သည်။
စာချုပ်မချုပ်ဆိုထားသော စရံငွေအာမခံထားရှိမှုအပေါ် ငွေပြန်အမ်းခြင်းသည် ဧည့်သည်မှအာမခံစာချုပ်ကို ရက် ၃၀ အတွင်းလက်ခံရရှိသည်နှင့် ပြန်အမ်းပေးမည်ဖြစ်သည်။ ငွေပြန်အမ်းမှုပမာဏသည် အာမခံထားသည့် ပမာဏပေါ်တွင်မူတည်ပါသည်။
စရံငွေ၊ ငွေသား၊ debit card၊ ငွေလွဲပြောင်းမှု၊ Alipay/WeChat တို့ဖြင့်ပေးချေထားသည့် စရန်ငွေများကိုမူ ငွေသား သို့မဟုတ် ငွေလွဲပြောင်းမှုဖြင့်သာ ပေးချေသွားမည်ဖြစ်သည်။ credit card ဖြင့် ငွေပေးချေမှုအတွက် credit card ဖြင့်သာ ပြန်အမ်းသွားမည်ဖြစ်ပြီး card လည်ပတ်မှုအပေါ်မူတည်၍ ၃ ပတ်မှ ၄ ပတ်အတွင်း ကြာမြင့်နိုင်ပါသည်။
credit card ဖြင့်ပေးချေထားပြီး ငွေသားဖြင့်လိုချင်သော ဧည့်သည်များအနေနှင့် ၂ ရာခိုင်နှုန်း မှ ၃ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ကျသင့်နိုင်မည့် credit card ကော်မရှင်ခနှင့် VAT ၇ ရာခိုင်နှုန်းကို ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။ (credit card အမျိုးအစားပေါ်မူတည်သည်။)
မူရင်းလက်ခံပြေစာကို ငွေပြန်အမ်းမှုအတွက် ငွေစာရင်းဌာနသို့ ပြန်ပေးရမည်ဖြစ်သည်။
ငွေသားဖြင့်ပြန်အမ်းပါက ဧည့်သည်ကိုယ်တိုင်ဆီသို့သာ ပေးချေသွားမည်ဖြစ်သည်။ ဧည့်သည့်၏မိသားစု၊ ဆွေမျိုး၊ ကိုယ်စားလှယ်၊ မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ ကိုယ်စားလက်ခံလိုပါက ဧည့်သည်ကိုယ်တိုင် အတည်ပြုထားသည့် သဘောတူလွှာနှင့်အတူ လက် မှတ်ထိုးထားသောအသုံးပြုဆဲနိုင်ငံကူးလက်မှတ်မိတ္တူကိုပါ တပါးတည်းယူဆောင်လာရမည်။ ငွေသားပြန်အမ်းမှုကို လက်ခံမည့်သူသည်လည်း အတည်ပြုနိုင်ရန်အတွက် မိမိ၏အသုံးပြုနေဆဲ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မိတ္တူကိုပါပြသပေးရမည်ဖြစ်သည်။
သောက်သုံးရမည့်ဆေးဝါးများကို ချက်ချင်းကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရသည့် ကုသမှုအစီအစဉ်များ သို့မဟုတ် ဧည့်သည်အတွက် နိုင်ငံခြားမှမှာယူထားရသည့် ဆေးဝါးများအတွက် ငွေပြန်အမ်းမည်မဟုတ်ပါ။ ဤအတွက်ဧည်သည့်အား ကြိုတင်အကြောင်းကြားပေးမည်ဖြစ်သည်။
ကုသမှုစတင်နေပြီးနောက် ဧည့်သည်မှ ကုသမှုကိုရပ်တန့်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါက ဆေးခန်းသို့စတင်လာရောက်ပြီးနောက်ကျသင့်သည့် ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ်များသည် ဧည့်သည်နှင့်သာသက်ဆိုင်ပါမည်။
ငှားရမ်းသုံးစွဲထားသည့် ပစ္စည်းများ ပျက်စီး/ပျောက်ဆုံးပါက ငွေပြန်အမ်းမည်မဟုတ်ပါ။
ခရီးသွားအာမခံသည် ဆေးကုသစရိတ်များ၊ လေကြောင်းလိုင်းမတော်တဆဖြစ်မှုများ၊ ခရီးသွားစဉ် ပျောက်ဆုံးမှုများအတွက် အကျုံးဝင်ပါသည်။ အကျုံးဝင်မှုအမျိုးအစားများကို သေချာလေ့လာပြီး လူကြီးမင်း၏လိုအပ်ချက်များအတွက် သက်ရောက်မှုရှိ၊ မရှိ သေချာစုံစမ်းပါ။ ဆေးဖက်ဆိုင်ရာသွားရောက်ကုသမည့်သူများအတွက် ပုံမှန်ခရီးသွားအာမခံသည် ကုသမှုကြောင့် သို့မဟုတ် ကုသနေစဉ်အတွင်းဖြစ်လာသည့်အရာများအတွက် အကျုံးမဝင်နိုင်ပါ။ ဆေးကုသခရီးစဉ်အတွက် ပြင်ဆင်ထားသည့် Medical tourism complications အာမခံသည်သာ ပိုသင့်တော်နိုင်ပါမည်။ အချို့အာမခံစည်းမျဉ်းများသည် ဆေးကုသနေစဉ်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော အရာများအတွက်လည်း အကျုံးဝင်နိုင်သည်။
အာမခံကုမ္ပဏီကို ဆက်သွယ်ပြီး နိုင်ငံခြားတွင်ဆေးကုသမှုများအတွက် အကျုံးဝင်၊ မဝင် မေးမြန်းပါ။
မိမိမှအရင်စိုက်ထုတ်ပေးရန်လိုအပ်မှုရှိမရှိနှင့် စိုက်ငွေပြန်အမ်းမှု ရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။
ဤအခြေအနေမျိုးရှိနေပြီးသားဆိုပါက အာမခံကုမ္မဏီနှင့်ဆက်သွယ်ပြီး သင့်ကုသမှုအတွက်အကျုံးဝင်၊ မဝင်အတည်ပြုပါ။
ငွေပြန်နှုတ်မှု၊ ပူးတွဲအာမခံနှင့် ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ်အတွက် အများဆုံးမည်မျှထိပြန်ရနိုင်မလဲဆိုတာ ရှာဖွေလေ့လာပါ။
စာချုပ်မပါဝင်သောအာမခံနှင့်ဆိုပါက ပြင်ပလူနာအဖြစ်ပြသမှုများအပေါ်တိုက်ရိုက်ငွေပေးချေမှုမရရှိနိုင်ပါ။ ဧည့်သည်ကိုယ်တိုင်မှ ငွေအပြည့်ပေးချေရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကုမ္ပဏီမှလိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများထုတ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး ဧည့်သည်ကိုယ်တိုင်မှ အာမခံဆီမှာတိုက်ရိုက်ငွေပြန်တောင်းယူရမည်ဖြစ်ပါသည်။